YEYINTNGE(CANADA): Thursday, November 13
The Statement of the 5th Conference of Burmese Students Democratic Organization (Toronto)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/13/20080အကြံပြုခြင်း
Burma related events in Toronto
We haveacouple of Burma related events to be held in Toronto on Saturday, November 15, and I hope you can attend both events.
Please pass on below information to all interested in Burma.
1) Amnesty International Toronto Human Rights Film Festival with BBC Film on Burma (Amnesty's Third Annual Real Awareness Film Festival)
WHERE: National Film Board Cinema,
Admission: PWYC at the door (suggested donation $5).
For more info on the festival, films and schedule please call 416 363 9933 ext.33 or go to www.aito.ca/reelawareness
I hope you will join us in protecting and restoring human rights in Burma!
2) Cahoots Theatre Projects (refugee youth from Burma)
You are invited to crossing Gibraltar 2008
For five weeks, 20 youth from Karen State (Burma) have been taking workshops withateam of Toronto's theatre professionals. Come join us for the presentation of their new theatre skills!
Where: Driftwood Community Centre - Room 1
4401 Jane St.
Please RSVP to Marjorie Chan at marjorie@cahoots.ca or 416.203.9000 ext. 3
It isatheatre training program for refugee youth, and for the last5weeks, theatre professionals have been working specifically with 20 refugee youth from Burma. This Saturday is the final presentation and they look forward to sharing it with you.
နိုဝင်ဘာ ၁၃ ၊ ၂၀၀၈ သတင်း
.................................. အားလုံးကို ချက်ချင်း လွှတ် ကင်ပိန်းပိုစတာ ..................................
ဧရာဝတီ နိုဝင်ဘာ ၁၃ ၊ ၂၀၀၈
မြန်မာနိုင်ငံသား အများအပြား ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့တွင် ဖမ်းဆီးခံရ
မောင်သစ်အောင် (နိရဉ္စရာ) ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံ အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာသူ မြန်မာ နိုင်ငံသား တဒါဇင်နီးပါးအား ဘင်္ဂလာရိုင်ဖယ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
လွန်ခဲ့သော ကြာသပတေးနေ့က တောင်ပြို-ခေါင်းတုံး နယ်စပ်မှ ၀င်ရောက်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၃ ဦးအား ဘင်္ဂလာ ရိုင်ဖယ် တပ်ဖွဲ့မှ မသင်္ကာမှု ဖြင့် ဖမ်းဆီးလိုက်သည်။
ဖမ်းဆီးခံရသူများမှာ ဦးမောင်ဘုချေ၏သား ဦး မောင်မောင်သိန်း (၃၉)နှစ်၊ ဦး စံလှဖြူ ၏သား ဦး မောင်ကြီး (၂၆)နှစ်နှင့် ဦးဘသိန်း၏သား ဦးအောင်ချစ်ကို တို့ဖြစ်ကြပြီး ၎င်းတို့မှာ မောင်တောမြို့ နယ်မှ ဖြစ်ကြသည်။
သူတို့ ၃ ဦးအား ထောက်လှမ်းရေး လုပ်ရန် လာသည်ဟု ယူဆပြီး မသင်္ကာမှုဖြင့် ယမန်နေ့က ဘင်ဒရိုင် (ရွာတော်) အကျဉ်းထာင်သို့ ပို့ဆောင်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းအပြင် နောက်ထပ် မြန်မာနိုင်ငံသား ၉ ဦးကိုလည်း ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံကို တရားမ၀င် ကျူးကျော် ၀င်ရောက်မှုကြောင့် တက်ကနက် မြို့နယ် ဆင်မဖြူကျွန်း (ဆာဟ်ပေါ်ရီကျွန်း) တွင် လွန်ခဲ့သော တနင်္လာနေ့က ဖမ်းဆီးလိုက်သည်။
ဖမ်းဆီးခံရသူများမှာ အာဘူကော်ဘီဆီဒီက်(၁၈)နှစ်၊ ရော်ဘီ အူလ္လာဟ် (၃၀)၊ မရု မိုဟာမတ်ဒ် (၁၈)၊ မိုဟာမတ် အာယူဘ် (၂၀)၊ မိုဟာမတ် ဆေလိမ်(၁၈)၊ နရု မိုဟာမတ် (၃၀)၊ ဖေါ်ရီဒူလ် အာလ်မော်၊ မိုဟာမတ် ဟာဆူနှင့် ဟာဆူ(၁၈)နှစ် တို့ဖြစ်ကြသည်။
သူတို့မှာ မောင်တောမြို့နယ်မှ ဖြစ်ပြီး ရေလမ်းကြောင်းမှ တဆင့် မလေးရှားနိုင်ငံကို သွားရောက်ရန် ရောက်ရှိလာသူများ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံတွင် ဖမ်းဆီးခံရသော မြန်မာနိုင်ငံသားများမှာ မောင်တောမြို့နယ်မှ ဖြစ်ကြသည်။
စစ်အစိုးရ၏ နှစ်ရှည်ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်နေမှုများအပေါ် နိုင်ငံတကာက ရှုတ်ချ
ဧရာဝတီ နိုဝင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၈
စစ်အစိုးရက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူများကို ထောင်ဒဏ် ၆၅ နှစ်စီ ချမှတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂက အလွန်အမင်း စိုးရိမ်ကြောင်းနှင့် အမေရိကန်အစိုးရက အပြင်းအထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချ လိုက်ကာ အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
“မိသားစုဝင်တွေ နဲ့ ရှေ့နေတွေကို ကြားနာခွင့်မပေးဘဲနဲ့ စစ်အစိုးရက တံခါးပိတ်တရားခွင်မှာ စီရင်ချက် ချခဲ့တာပဲ” ဟု အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မစ္စတာ Robert A Wood က သတင်းထောက်များကို ယမန်နေ့က ပြောကြားသည်။
Robert A Wood က လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားနေသော အရပ်သားများကို ဆက်လက်ဖမ်းဆီးခြင်း၊ အနှောင့် အယှက်ပြု ခြင်းများကို ရပ်တန်းက ရပ်ရန်လည်း မြန်မာစစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုလိုက်သည်။
"စစ်အစိုးရအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် ဖမ်းဆီးထားသည့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂၀၀၀ ကျော်ကို ချက်ချင်းလွှတ်ပေးပြီး ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုကိုယ်စားလှယ်တွေ ပါဝင်တဲ့ စစ်မှန်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတွေစဖို့ ကျနော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
အမေရိကန်အစိုးရအနေဖြင် နိုင်ငံတကာမိတ်ဆွေများနှင့်အတူပူးပေါင်းကာ မြန်မာစစ်အစိုးရကို ထပ်မံ၍ ဖိအားများပေးရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရှာဖွေ နေကြောင်းလည်း သိရသည်။
"ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ ဗမာပြည်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျနော်တို့အရင် အကြိမ်များစွာ ပြောခဲ့သလို အလွန်ပဲ စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ရပါတယ်။ နောက်ထပ် ဗမာအစိုးရကို ဖိအားထပ်တိုးဖို့လည်း ကျနော်တို့ ဆက်လက်ပြီး နည်းလမ်းရှာဖွေ သွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟုလည်း Robert A Wood က ဆက်ပြောသည်။
အမေရိကန်အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားနေသည့် US campaign for Burma အဖွဲ့ကလည်း အဖွဲ့ဝင် ၁၅ နိုင်ငံပါ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးမှုများ ပိုမို ပြုလုပ်ရန် အမေရိကန်အစိုးရကို တိုက်တွန်းထားသည်။
US campaign for Burma ၏ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်ဒင်က “ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ကို အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတခု အမြန်ခေါ်ယူပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရ အပေါ် တကမ္ဘာလုံးက လက်နက်ရောင်း ချမှု ပိတ်ဆို့ဖို့ အပါအဝင် နိုင်ငံတကာရဲ့တုံ့ပြန် ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်သွားဖို့ အမေရိကန်အစိုးရကို ကျနော် တို့ တောင်းဆိုပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
“ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံး လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာကို မြန်မာစစ်အစိုးရက ဘာကြောင့်ပယ်ချလိုက်တယ်ဆိုတာဟာ အခုတော့ရှင်းသွားပါပြီ”ဟုလည်း သူကပြော သည်။
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂကလည်း မြန်မာ အတိုက်အခံလှုပ်ရှားသူများ ကိုထောင်ဒဏ် နှစ်ရှည်ချလိုက်မှုအပေါ် အလွန်အမင်း စိုးရိမ်ကြောင်းပြောသည်။
ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချူပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်း၏ လက်ထောက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Marie Okabe က“လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းက ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြင်းထန်းလွန်းတဲ့ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်တာတွေ ကြားသိရတဲ့အတွက် အထွေထွေအတွင်းရေးမှုချူပ်အနေနဲ့ အလွန်အမင်းစိုးရိမ် မကင်း ဖြစ်ရပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ထို့အတူ မလေးရှား၊ စင်္ကပူ၊ ထိုင်း၊ ကမ္ဘာဒီးယား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှားအစရှိသည့်နိုင်ငံများမှ ပါလီမန် အမတ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အာဆီယံ လွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့(AIPMC)ကလည်း နိုဝင်ဘာလ ၁၁ရက်နေ့က ရန်ကုန် အင်းစိန်ထောင် အတွင်းရှိ တံခါးပိတ်အထူးခုံရုံးမှ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများကို ထောင်ဒဏ် ၆၅ နှစ် ချလိုက်မှုအပေါ် အလွန်အမင်းစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မိကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြားသည်။
ကိုသက် နိုဝင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၈
ရန်ကုန်မြို့ လှိုင်သာယာမြို့နယ်မှ အသက် ၇၂ နှစ်ရှိ ဦးတင်ယု အပါအဝင် အန်အယ်လ်ဒီပါတီဝင် ၁၁ ဦးကို အင်းစိန်ထောင်တွင်ရုံးထိုင်ထားသည့် အထူးတရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ် ၆ လစီ ချမှတ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းတို့သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရေး ဝတ်ပြုဆုတောင်းမှုများကြောင့် အဖမ်းခံရခြင်းဖြစ်ပြီး အများပြည်သူ ဆူပူမှုဖြစ်စေရန် လှုံ့ဆော်မှု ၅၀၅ (ခ) တို့အပါအဝင် တခြားဥပဒေပုဒ်မ ၄ ခုဖြင့် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသည်ဟု အင်းစိန်ထောင် ဝန်ထမ်းအသိုင်းအဝန်းနှင့် နီးစပ်သူတဦးက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း တွံတေးမြို့နယ်မှ အန်အယ်လ်ဒီလူငယ် ကိုရာဇာက “ဒါဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကို တရားရုံးနဲ့ တရားသူကြီးတွေကပါ လိုက်နာနိုင်စွမ်းမရှိတော့တဲ့အခြေနေကို ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်ကို စစ်အစိုးရက တရားလက်လွတ်အုပ်စိုးနေတယ်၊ ပြည်သူကရွေးကောက်တင်မြှောက် ထားတဲ့ အစိုးရတရပ်သာဆိုရင် အခုလိုလုပ်ခွင့်မရှိဘူး၊ အဲဒီတော့ စစ်အစိုးရရဲ့တရားမ၀င်မှုကိုပါ အခုဖြစ်ရပ်က သက်သေပြနေတာပဲဖြစ်တယ်” ဟု ဝေဖန်ပြောဆိုသည်။
ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်၏ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သည့် မဟန်နီဦးကိုလည်း ယနေ့နေ့လယ်ပိုင်းက ထောင်ဒဏ် ၉ နှစ်ခွဲ ချမှတ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ မဟန်နီဦးသည် အသက် ၂၁ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ဥပဒေ နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသူ ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကင်းမြို့နယ် အန်အယ်လ်ဒီ ဥက္ကဌ ကိုမျိုးခင် ထောင်ဒဏ် ၄ နှစ်ခွဲနှင့် အန်အယ်လ်ဒီပါတီဝင် ကိုမျိုးခိုင်ကို ထောင်ဒဏ် ၆ နှစ်ခွဲ ယနေ့ချမှတ်လိုက်သည်ဟု အန်အယ်လ်ဒီပါတီ အသိုင်းအဝန်းက ဧရာဝတီကို ပြောဆိုသည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့ဝင် ကိုမျိုးရန်နောင်သိန်းနှင့် ကိုမင်းမင်းစိုးတို့အား ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်စီချမှတ်ပြီး အလုံမြို့နယ်တရားရုံးက မမြမြသိမ့်အား ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်ချလိုက်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်က ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ဗကသ များအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့ကို အင်တိုက်အားတိုက်အကူအညီများပေးခဲ့သည့် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လည်းဖြစ်ပြီး ကဗျာဆရာများသမဂ္ဂကိုဦးဆောင်ခဲ့သည့် ကိုမင်းဟန်ကိုလည်း အင်းစိန်ထောင်ရှိ အထူးတရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၁၁ နှစ် ချမှတ်လိုက်သည်ဟု ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့ဝင်တဦးက ပြောသည်။
စစ်အစိုးရက ယနေ့တနေ့တည်း နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူ ၂၀ ခန့်ကို ထောင်ဒဏ်အသီးသီးချမှတ်ခဲ့ပြီး ယခုအပတ်အတွင်း နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူ ၆၀ ကျော်ကို ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံကြရသည်။
NEJ/ ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၈
မင်းနိုင်သူ/ ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၈
အဆိုပါ အရန်ရဲများအား သင်တန်းပြီးဆုံးပါက အရန်ရဲကတ်ပြားများထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး တလလျှင် လစာ (၃၀,၀၀၀) ကျပ် ပေးထားသည့်အပြင် အခြားအောက်ဆိုဒ်အဖြစ် လိုင်းကြေးငွေ တောင်းယူခွင့်များပါ ပေးထားကာ ၎င်းတို့၏အဓိကတာဝန်မှာ သတင်း အချက်အလက် စုဆောင်းပေးရန်နှင့် နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကို စောင့်ကြည့်ရန် ဖြစ်သည်။
လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ တော်တော်တော့ ပေးထားတယ်။ နောက် လက်ထိတ်တခု၊ အိုင်ကွန်စကားပြောစက် တလုံးရယ်၊ နံပါတ်တုတ်တချောင်းပါ ပေးထားတယ်” ဟု မြို့ခံက ဆက်ပြောသည်။
ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူ (၁၈) ဦးကို ထောင်ဒဏ်များချမှတ်
ကိုဝိုင်း/ ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၈
အင်းစိန်ထောင်တွင်းတရားရုံး၊ တာမွေတရားရုံးနှင့် အလုံမြို့နယ်တရားရုံးတို့မှ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားတက်ကြွသူ အနည်းဆုံး (၁၈) ဦးကို ယနေ့ ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်လိုက်ကြောင်း တရားရုံးနှင့် နီးစပ်သူများထံမှ သိရသည်။
ကိုရန်နိုင်ထွန်း (ကြည့်မြင်တိုင်)၊ ကိုသန့်ဇင်မျိုး (လှိုင်သာယာ)၊ ကိုအောင်မင်းနိုင်ခေါ် မီးသွေး (ကြည့်မြင်တိုင်)၊ ဦးတင်ယု (လှိုင်သာယာ)၊ ကိုကျော်စိုးဝင်း၊ ကိုသန်းဝင်း (လှိုင်သာယာ)၊ ကိုမျိုးကျော်ဇင် (အင်းစိန်)၊ ကိုဝင်းမြင့်၊ ကိုဆန်းနိုင်၊ ကိုစိုးမင်းခေါ် စိုးငယ်၊ မလှလှမော် (လှိုင်သာယာ) စသည့် (၁၁) ဦးကို ပုဒ်မအသီးသီးဖြင့် အင်းစိန်ထောင် အထူးတရားရုံးမှ ထောင်ဒဏ် (၇) နှစ်ခွဲ စီချမှတ်လိုက်သည်။
၎င်းတို့အထဲမှ ကိုရန်နိုင်ထွန်း၊ ကိုအောင်မင်းနိုင်ခေါ် မီးသွေး၊ မျိုးကျော်ဇင်တို့သည် လှိုင်ယာသာမြို့နယ်တရားရုံးတွင် အမှုစစ် ဆေးခံခဲ့ရစဉ်က တရားစီရင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အယုံအကြည်မရှိတော့ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည့်အတွက် ပုဒ်မ ၂၂၈ ဖြင့် ထောင် (၆) လချထားခံခဲ့ရပြီးသူများဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ကိုအောင်မင်းနိုင်ခေါ် မီးသွေးသည် ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က အနောက်ပိုင်းခရိုင် တာမွေမြို့နယ်တရားရုံးမှ ထောင်ဒဏ် (၄) နှစ်ခွဲချထားခံခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပြီး မျိုးကျော်ဇင်သည်လည်း တရားရုံးမထီမဲ့မြင်မှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် (၆) လချခံရပြီးနောက် မကြာမီ အခြားပုဒ်မတခုဖြင့် ထောင် (၂) နှစ်ချခံထားရသူဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
အနောက်ပိုင်းခရိုင်တာမွေမြို့နယ်တရားရုံးက ယနေ့ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်မှုများမှာ မဟန်နီဦး (ဥပဒေကျောင်းသူ) (၆) နှစ်၊ ကိုမျိုးခင် (၉) နှစ်ခွဲ၊ ကိုမျိုးခိုင် (၆) နှစ်ခွဲတို့ဖြစ်သည်။ အလုံမြို့နယ်တရားရုံးကလည်း မမြမြသိမ့်ကို (၅) နှစ်ချမှတ်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် အင်းစိန်ထောင်တွင်းတရားရုံးမှပင် ကိုမင်းဟန် (၁၁) နှစ်၊ ကိုမျိုးရန်နောင်သိန်း (၂) နှစ်နှင့် မင်းမင်းစိုး (၂) နှစ် အသီးသီးချမှတ်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ထောင်ဒဏ် (၆၅) နှစ်စီချမှတ်ခံရသည့် ၈၈ ကျောင်းသားများအပေါ် နောက်ထပ် ထောင်ဒဏ်ဆက်ချဖို့အလားအလာရှိ
ပြီးခဲ့သည့် တနင်္လာနေ့က ထောင်ဒဏ် (၆၅) နှစ်စီချခံခဲ့ရသည့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား (၁၄) ဦးနှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်ရှိနေ သေးသော အမှုများကို ဆက်လက်စစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ကြောင်းနှင့် နောက်ထပ်ထောင်ဒဏ် ဆက်ချဦးမည့်အလားလာရှိကြောင်း ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရသူတဦးဖြစ်သည့် ကိုပဏ္ဍိတ်ထွန်း၏ မိခင် ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ဦးက ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောသည်။
စီရင်ချက်ချလိုက်ပြီးဖြစ်သောကြောင့် ယခင်က စနေ၊ တနင်္ဂနွေအစား ကြာသပတေး၊ သောင်္ကြာ၊ စနေ ပြောင်းတွေ့ရမည် ထင်မှတ်၍ ယနေ့ ထောင်ဝင်စာသွားတွေ့ရာ တွေ့ခွင့်မရခဲ့ဘဲ ထောင်တာဝန်ရှိသူများထံမှ ယင်းကဲ့သို့ သိရှိလာရခြင်းဖြစ်သည်။
ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ဦးက “လုံးဝတွေ့ခွင့်မရှိဘူး။ ပါသွားတဲ့အစားအသောက်နဲ့ အနွေးထည်တောင် ပါဆယ်လက်မခံဘူး။ သူတို့အမှုဆက် စစ်ဆေးဖို့ ရှိသေးတယ်လို့ပဲ ဖြေတယ်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေမှပဲ အရင်တုန်းကလိုမျိုးပဲတွေ့ရမယ်။ ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာ တောင် မသိသေးဘူး။ အမှုတွေအများကြီး စွဲထားတာလေ။ နောက်ထပ်က ထပ်ချဦးမယ့်အလားအလာတွေရှိသေးတယ်” ဟု ပြောသည်။
ထောင်ဒဏ် (၆၅) နှစ်ချမှတ်ခြင်းခံရသည့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား (၁၄) ဦးထဲမှ ကိုအံ့ဘွယ်ကျော်၏ မိခင်၊ ရွှီးခေါ် မစန္ဒာမင်း၏ ခင်ပွန်း၊ ကိုသက်ဇော်၏ ဖခင်တို့လည်း ယနေ့ ထောင်ဝင်စာလာတွေ့သည်ကို မြင်ခဲ့ရကြောင်း ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ဦးက ပြောသည်။
ထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည်ချမှတ်ခြင်းခံရသူ အဆိုပါ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများသည် ၂၀၀၇ ခု စက်တင်ဘာ သံဃာ့ မေတ္တာသုတ် ရွတ်ဆို ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲမတိုင်မီ လောင်စာဆီဈေးနှုန်းနှင့် ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေး ငြိမ်းချမ်းစွာ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီးနောက် နအဖ အာဏာပိုင်များ၏ ဖမ်းဆီးခြင်းခံကြရသူများဖြစ်သည်။
ယခုကဲ့သို့ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်ခြင်းခံရသူများအပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကို အမြန် လွှတ်ပေးရန် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဘန်ကီမွန်းက ထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်သည်။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်း အဆိုပါ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းများကို ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချလိုက်ပြီး ထောင်ဒဏ်ချခံ ရသူ ဒီမိုကရေစီအရေး ဆောင်ရွက်သူများသည် ရာဇ၀တ်သားများမဟုတ်ဘဲ နအဖစစ်အစိုးရ၏ တရားမ၀င်မှုကို ငြိမ်းချမ်းစွာ စိန်ခေါ်သူများသာဖြစ်ကြောင်း ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
သံဃာ့အရေးအခင်းနောက်ပိုင်း လူငယ်များ ဘာသာရေးကို အာရုံစိုက်
ပြည်တွင်း မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားများအသင်း ဘာသာရေး လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်
မြင့်မိုးဇော်/ ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၈ မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားလူငယ်များ အသင်းမှဦးစီးကာ ယနေ့ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့တွင်
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မှာ လွိုင်ကထုံး အလှမယ်ရွေးချယ်ပွဲကျင်းပမြ၀တီမြို့မှ မေဖူးဝေ ပထမဆုဆွတ်ခူး
NEJ/ ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၈ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မြို့ ထိုင်းဘက်ခြမ်းရှိ ထိုင်း-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးတံတားထိပ်တွင် တန်ဆောင် မုန်းလပြည့်နေ့ ထိုင်းရိုးရာ မီးမျှောပွဲ (လွိုင်ကထုံး) နှင့် တန်ဆောင်မုန်းလ မီးထွန်းပွဲကို ယမန်နေ့ညက ထာ့စိုင်လို့ဝ မြူနီစပယ်အဖွဲ့မှ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဒေသခံ ထိုင်းလူမျိုးများနှင့် ဒေသတွင်းရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ (၅) သောင်းခန့် ပွဲတော်သို့ လာရောက်ကြသည်။
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ညတွင် ကျင်းပသည့် မီးမျှောပွဲတွင် ထိုင်း-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လွိုင်ကထုံး အလှမယ်ရွေးချယ်ပွဲ ကျင်းပခဲ့ရာ လွိုင်ကထုံးပွဲတော် ကျင်းပရေး ကော်မတီ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံမှ အလှမယ်များ လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည်။
ပြိုင်ပွဲဝင် မြန်မာအလှမယ်များမှာ မြဝတီခရိုင်အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့မှ စေလွှတ်သူ (၁၀) ဦးနှင့် မယ်တော်ဆေးခန်းမှ (၂) ဦး၊ မဲဆောက်အတွင်းရှိ အလုပ်ရုံ၊ စက်ရုံများမှ (၃) ဦး စုစုပေါင်း (၁၅)ဦး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည်။ ပထဆုကို မမေဖူးဝေ (မြဝတီ)၊ ဒုတိယဆုကို မဇင်မာဦး (မြဝတီ)၊ တတိယဆုကို မရွှေစင်ထူး (မြဝတီ) တို့ အသီးသီး ရရှိခဲ့ကြသည်။
လွိုင်ကထုံး မြန်မာအလှမယ် ရွေးချယ်ပွဲနည်းတူ ထိုင်းလွိုင်ကထုံး အလှမယ်ရွေးချယ်ပွဲကိုလည်း တပြိုင်တည်း ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဆုရရှိသူများအား မဲဆောက်မြို့ပိုင်နှင့် ထာ့စိုင်လို့ဝ မြူနီစီပယ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင် များက စလွယ်နှင့် ငွေသားဆုများ ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
ပထမဆုရရှိသူ မမေဖူးဝေက “နောင်ကိုလည်း လာခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင် ထပ်လာချင်ပါသေးတယ်။ အခုလို ထိုင်း-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးပွဲမှာ လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာတယ်။ အနိုင်အရှုံးအဓိက မဟုတ်ပါဘူး။ အတွေ့အကြုံနဲ့ ဗဟုသုတ အသစ်တွေလည်း ရတယ်။ မြန်မာ မိန်းကလေးတွေကိုလည်း ကိုယ်ကာယနဲ့ ကျန်းမာရေးကို လေ့ကျင့်ထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးဂုဏ်ကို ဆောင်နိုင်တဲ့လူတွေ ဖြစ်စေချင်တယ်။ လာရောက် အားပေးကြတဲ့ မဲဆောက်က မြန်မာတွေကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် လွိုင်ကထုံးမီးမျှောပွဲညတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပွဲတော်လာရောက်နိုင်ရေးအတွက် ထိုင်းအာဏာပိုင်များက မဲဆောက်-မြဝတီ ထိုင်း-မြန်မာချစ်ကြည်ရေးတံတားအား ည (၁၂) နာရီအထိ ဖွင့်လှစ်ပေးထားသဖြင့် မြဝတီဘက်မှ မြန်မာနိုင်ငံသားများလည်း မီးမျှောပွဲသို့ လာရောက်ဆင်နွှဲကြသည်။ ပွဲတော်တွင် နှစ်စဉ် ထည့်သွင်းကျင်းပသည့် ထိုင်း-မြန်မာချစ်ကြည်ရေး လက်ဝှေ့ပွဲကို ယခုနှစ်တွင် ထည့်သွင်းကျင်းပခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
ရတနာပုံ ဆိုက်ဘာစီးတီး ပြပွဲသို့ သွားဖို့အရေး ကွန်ပြူတာလုပ်ငန်းရှင်များ ၀န်လေး
ကြာသပတေးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 13 2008 23:36 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ ကုန်ကျစရိတ်များပြီး အကျိုးအမြတ်ရရန် မသေချာသဖြင့် ရတနာပုံ ဆိုက်ဘာစီးတီး နည်းပညာပြပွဲသို့ သွားရောက်ပြသရန်အတွက် ကွန်ပြူတာ လုပ်ငန်းရှင်များမှ ၀န်လေးနေသည်။
လာမည့် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း စစ်အစိုးရ ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနက ခေါ်ယူကျင်းပမည့် မန္တလေးတိုင်း ပြင်ဦးလွင်မြို့အနီးရှိ ရတနာပုံ ဆိုက်ဘာစီးတီးရှိ နည်းပညာပြပွဲသို့ ကုန်ကျစရိတ်များပြီး အကျိုးအမြတ်အတွက် မသေချာသဖြင့် သွားရောက်ရန် အခက်တွေ့နေကြောင်း ကွန်ပြူတာ လုပ်ငန်းရှင်များက ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
“ဆိုင်ခန်းယူပြီး ပြပေးရမယ်လို့ ဆက်သွယ်ရေးဌာနက ပြောလို့သာ သွားခဲ့တာပါ။ ငွေကြေး အမြတ်အစွန်းကို မကြည့်ဘဲ လုပ်ခဲ့ရတာ။ ရန်ကုန်ပွဲတွေလောက် လူမလာဘူးလေ” ဟု ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့တွင် ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချနေသည့် ကွန်ပြူတာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းဆိုင်မှ ဈေးကွက် မန်နေဂျာတဦးက သူတို့ အခက်အခဲကို မဇ္ဈိမကို ပြောပြသည်။
ယခင်နှစ်က ကုန်ကျစရိတ် ကြီးမားပြီး လာရောက်ကြည့်ရှုသူ နည်းပါးခဲ့သဖြင့် အကျိုးအမြတ်ရရန် မသေချာကြောင်း သိထားသလို၊ ယခုနှစ်တွင်လည်း မဖြစ်မနေ ပါဝင်ပြသရမည်ဟု ပွဲစီစဉ်သူ အာဏာပိုင်များက တိုက်တွန်းထားပြန်သည့်အတွက် ၀င်ရောက်ပြသရကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
ပြပွဲကြီးတွင် ပါဝင်ပြသကြမည့် လုပ်ငန်းရှင် အများအပြားမှာ မိမိတို့၏ စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းများ ထိခိုက်နစ်နာမှု ရှိမည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် သွားရောက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် ကွန်ပျူတာ လုပ်ငန်းရှင်တဦးကလည်း ပြောသည်။
“ခရီးက ထောက်တယ်။ ဟိုမှာ ၀န်ထမ်းတွေ စားဖို့၊ နေဖို့ ဒါတွေ ရှိသေးတယ်။ သူတို့နဲ့က (စစ်အစိုးရ) စီးပွားရေးအရရော အကုန်ဆက်နွယ်နေတော့ သူတို့ခိုင်းတယ်ဆို သွားကြရတာပေါ့ဗျာ” ဟု သူက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ပြပွဲသို့ သွားရောက်ပြသခဲ့သည့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ပြူတာ အစိတ်အပိုင်း ပစ္စည်းများ ရောင်းချသည့် လုပ်ငန်းရှင်တဦးကလည်း ယခုလို ဝေးလံသည့်နေရာတွင် တကူးတက သွားရောက် ပြသရသည့်အတွက် ကုန်ကျစရိတ် ပိုများပြီိး လာရောက် ကြည့်ရှုသူ နည်းပါးသည့်အတွက် ယခုနှစ်အတွက် ဆိုင်ခန်းယူရန် ဆန္ဒပင် မရှိကြောင်း ယခုလို ပြောသည်။
“လာကြည့်မယ့်သူအတွက်က ခရီးကလည်း တကူးတကဆိုတော့ နည်းတယ်။ ကျနော်တို့ ကုမ္ပဏီဆိုရင် မကိုက်ပါဘူး။ အိပ်စိုက်ရတာပါ။ ဒီနှစ်တော့ သွားဖို့က ဖီလင်မလာဘူး” ဟု သူက ဆိုသည်။
ပြပွဲကို လာမည့်ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ရက်သတ္တ ၂ ပတ်ကြာ ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားပြီး ဆိုင်ခန်းပေါင်း မည်ရွေ့မည်မျှ ပါဝင်မည်ကို သူတို့က အတိအကျ မသိကြပါ။
ကွန်ပြူတာပညာရှင်အသင်း တာဝန်ခံတဦးကမူ ဆိုင်ခန်းတခန်းလျှင် မြန်မာကျပ်ငွေ ၂ သိန်းခွဲဖြင့် ငှားရမ်းရမည်ဖြစ်ပြီး ပါဝင်ပြသမည့် ကုမ္ပဏီများမှ စပေါ်ငွေအဖြစ် ကျပ်ငွေ တသိန်းကို ပေးသွင်းနိုင်ပြီဟု ပြောသည်။
သူက “ကျမတို့ဆီမှာ စပေါ်သွင်းလို့ ရပါပြီ။ ဆိုင်ခန်းက ၆၀ နီးပါးလောက်တော့ ရှိမယ်” ဟု ခန့်မှန်းပြောဆိုသည်။
မန္တလေးတိုင်း ပြင်ဦးလွင် (မေမြို့) အနီးတွင် ရတနာပုံ ဆိုက်ဘာစီးတီး ခေါ် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် နည်းပညာမြို့တော်ကို မြန်မာစစ်အစိုးရက ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ရတနာပုံမြို့သစ် ဖွင့်လှစ်စက ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ကုမ္ပဏီပေါင်း ၁၁၅ ခုက ခေတ်မီအဆင့်မြင့် အိုင်တီပစ္စည်းများ၊ ကွန်ပြူတာ ပစ္စည်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ ခင်းကျင်းပြသခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ရတနာပုံ ဆိုက်ဘာစီးတီးအတွက် အိန္ဒိယ၊ တရုတ်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှ ဖိုင်ဗာလိုင်းဖြင့် အင်တာနက် ချိတ်သွယ်ယူရန် စီစဉ်ထားပြီး တရုတ်ပြည်နှင့် ဆက်သွယ်ထားသည့် လမ်းကြောင်းမှာ ပြီးစီးသွားသဖြင့် အသုံးပြုခဲ့သည်။ လုပ်ငန်း လည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် လျှပ်စစ်မီးကို ရွှေလီ ရေအားလျှပ်စစ်မှ ထုတ်ယူခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှ SHIN Satellite ၊ တရုတ်မှ ZTE ၊ Alcatel Shanghai Bell ၊ မလေးရှားမှာ IP Tel နှင့် ရုရှားနိုင်ငံမှ CBOSS အစရှိသည့် ကုမ္ပဏီများက လာရောက်ကာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမည်ဟု စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ မည်သို့ အခြေအနေ ရှိနေသည်ကို မသိရှိသေးပါ။
အဆိုပါ မြို့တော်သစ်ဖွင့်ပွဲနှင့် ခင်းကျင်းပြသခဲ့သည့် ပြပွဲအပြီး ယခုအကြိမ်သည် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ဖြစ်သည်။
ကြာသပတေးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 13 2008 19:19 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာများ နှစ်စဉ်ကျင်းပလေ့ရှိသည့် တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ အခါသမယ ဖြစ်သည့် ယမန်နေ့က ကထိန်ခင်းပွဲသည် ရန်ကုန်တိုင်း မြို့နယ်များ၌ စည်ကားမှု မရှိဘဲ ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကမ်းရိုးတန်းသုံး ဖုန်းများ ရန်ကုန်တွင် အသုံးပြုမှု တွင်ကျယ်
ကြာသပတေးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 13 2008 18:02 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ ကမ်းရိုးတန်းသုံး CDMA 450 MHz ဖုန်းများကို GSM ဖုန်းထက် ပိုမို ချပေးလာသောကြောင့် ရန်ကုန်မြို့တွင်း၌ ကျယ်ပြန့်စွာ သုံးစွဲလာသလို ဈေးနှုန်းလည်း ပိုမို မြင့်တက်လာသည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်းနောက်ပိုင်း မုန်တိုင်းသင့် ဒေသများအတွင်း ဆက်သွယ်ရေး လွယ်ကူစေရန်အတွက် မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ကမ်းရိုးတန်းဖုန်းများကို စတင်ချပေးခဲ့ရာ ယခုတွင် ပိုမို ချပေးလာသော်လည်း ဈေးနှုန်းမှာမူ ပိုမို မြင့်တက်လာခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
"အခုဆို တော်တော်များများ ကမ်းရိုးတန်းဖုန်းတွေချည်း ချပေးတာ များတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လက အလုံးရေ တသောင်းနီးပါး ချပေးတာ ရှိတယ်" ဟု အမည်မဖော်လိုသူ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ကြေးနန်းဌာနမှ ၀န်ထမ်းတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ကမ်းရိုးတန်းဖုန်းများ အနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တွင်း၌လည်း အခြား GSM ဖုန်းများနည်းတူ ဆက်သွယ်မှုလိုင်းများ အဆင်ပြေခြင်းကြောင့် အသုံးပြုလိုသူ ပိုများလာခြင်း ဖြစ်သည်။
"အဲဒီဖုန်းက တခြားဖုန်းတွေထက် လိုင်းပိုကြည်တယ်လေ။ လိုင်းမမိတဲ့ နေရာလည်း ရှိတော့ ရှိတာပေါ့" ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
ထိုဖုန်းများကို စတင်ချပေးစဉ်က ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သည့် ကုမ္ပဏီများကို ချပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုနောက်ပိုင်းတွင် ကမ်းရိုးတန်း ဒေသများတွင် သာမက ရန်ကုန်ကဲ့သို့သော မြို့များတွင်ပါ အသုံးပြုနိုင်သဖြင့် စိတ်ဝင်စားမှု ပိုမိုများလာကာ ပြင်ပဈေးကွက်တွင် ဈေးနှုန်း မြင့်လာသည်။
ရန်ကုန်မြို့မှ ကမ်းရိုးတန်းဖုန်း အသုံးပြုသူ တဦးက "သူက GSM လိုပဲ လိုင်းမိတော့ အဆင်ပြေတယ်။ အရင်က ၀ယ်ရတာ ၁၇ သိန်းခွဲပဲ ရှိတယ်။ အခုကတော့ သိန်း ၂၀ ဖြစ်သွားပြီ" ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
မိုဘိုင်းဖုန်း အရောင်းအ၀ယ် ဈေးကွက်တွင် ကမ်းရိုးတန်းဖုန်းများမှာ အမြတ် ပိုမိုရသည်ဟု မိုဘိုင်းဖုန်း ၀ယ်ရောင်းဈေးကွက်မှ ပွဲစားများ အပြောအရ သိရသည်။
မိုဘိုင်းဖုန်း ၀ယ်ရောင်းလုပ်နေသော ပွဲစားတဦးက "ကမ်းရိုးတန်းဖုန်းက သွင်းဈေးက ၁၁ သိန်းဝန်းကျင်ပဲ ရှိတယ်။ အခုက လူသုံးများလာတော့ သိန်း ၂၀ လောက်ဖြစ်သွားတယ်လေ" ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ယခင်က ကမ်းရိုးတန်းသုံးဖုန်း ပေါက်ဈေးမှာ ၁၇ သိန်းမှ ၁၈ သိန်းအထိသာ ရှိနေသည်။ GSM မိုဘိုင်းဖုန်း တလုံးအတွက် အစိုးရနှုန်းထားမှာ ၁၅ သိန်းနှင့် ၅ သောင်းရှိပြီး၊ ပြင်ပ မိုဘိုင်းဖုန်းလောကတွင်မူ GSM ဖုန်းတလုံးမှာ သိန်း ၂၀ မှ ၂၅ သိန်းအထိ ပေါက်ဈေး ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လက်ရှိအသုံးပြုနေသော မိုဘိုင်းဖုန်း အမျိုးအစားများမှာ ၀၉ ၈၀ xxx နှင့်စသော GSM, CDMA ကြိုးမဲ့ ခြင်းဖုန်း၊ ၇၀ xxx နှင့်စသော စီဒီအမ်အေ ဖုန်း၊ ၀၉ ၉၉ xxx နှင့်စသော TDMA ဖုန်းများ ဖြစ်သည်။ ယခု ကမ်းရိုးတန်းဖုန်းများမှာမူ CDMA 450 MHz အမျိုးအစား ဖုန်းများ ဖြစ်ကြသည်။
ကမ်းရိုးတန်းသုံးဖုန်းများမှာ အထိုင်ဖုန်းတခု လိုအပ်သည်။ SIM card ကို အသုံးပြုရပြီး GSM ဖုန်းများမှ SIM card နှင့် မတူကွဲပြား၍ Hand Set သီးသန့် အသုံးပြုရသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင်းနှင့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွင် အသုံးပြုလျှင် အထိုင်ဖုန်း မပါဘဲ သုံး၍ ရနိုင်သော်လည်း ရန်ကုန် ဧရိယာနှင့် လှမ်းသော တွံတေး၊ သန်လျင်ကဲ့သို့ ဒေသများတွင်မူ အထိုင်ဖုန်းရှိမှ သုံးရသည်မှာ အဆင်ပြေကြောင်း ဖုန်းအသုံးပြုသူများက ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ကမ်းရိုးတန်းဖုန်းများကို ရန်ကုန် အပါအ၀င် ပုသိမ်၊ မအူပင်၊ ဘိုကလေး၊ ဖျာပုံ၊ ဟိုင်းကြီးကျွန်း စသည့် မြို့ပေါင်း ၅၀ ခန့်တွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
မိုဘိုင်းဖုန်းလျှောက်လွှာများကို ရန်ကုန်တိုင်းမှူး၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဆက်သွယ်ရေး မန်နေဂျာတို့ထံသို့ တင်ရသည်။
ဆက်သွယ်ရေးမှတဆင့် ဖုန်းချပေးရန်အတွက် စာရင်းကိုမူ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (တရက) ထံမှ အတည်ပြုမှုကို ယူရသည်။ လျှောက်လွှာများကို လူကြီးများနှင့် နီးစပ်ရာ အသိုင်းအ၀ိုင်းများကို ပိုမိုချထားပေးပြီး အခြား လျှောက်ထားသူများကိုမူ မဲစနစ်ဖြင့် ချထားပေးသည်ဟု ဆက်သွယ်ရေးနှင့် နီးစပ်သော အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ သိရသည်။
တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ၁၅ ဦး ထောင်ဒဏ်များ ကျခံရ
ကြာသပတေးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 13 2008 18:27 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ တရားဆိုင်နေရသည့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကို စီရင်ချက်များ ချမှတ်နေမှု၏ နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် ယနေ့တွင် အနည်းဆုံး ၁၅ ဦးထက်မနည်း ထောင်ဒဏ် ၁၁ နှစ်အထိ ရှည်လျားသော ပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်လိုက်သည်။
ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေးနှင့် ရွှေဝါရောင်တွင် ပါဝင်သဖြင့် အဖမ်းခံရသည့် လှိုင်သာယာမြို့နယ်မှ အန်အယ်ဒီ ပါတီဝင် ဦးတင်ယု၊ ကိုသန်းနိုင်၊ ကိုစိုးမင်းမင်း၊ မလှလှမော်၊ ကိုသန့်ဇင်မျိုး၊ ကိုကျော်စိုးဝင်း၊ ကိုဆန်းဝင်း၊ ဦးဝင်းမြင့်၊ ကိုအောင်မင်းနိုင်၊ ကိုမျိုးကျော်ဇင်နှင့် ကိုရန်နိုင်ထွန်း (ကြည့်မြင်တိုင်)တို့အား နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေရန် လှုံ့ဆော်မှုအပါအ၀င် ပုဒ်မ ၄ ခုဖြင့် အင်းစိန်ထောင်တွင်း တံခါးပိတ် တရားခွင်များတွင် ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်ခွဲစီ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ကြောင်း တရားရုံးနှင့် နီးစပ်သူများက ပြောဆိုသည်။
ထို့အပြင် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် အဖမ်းခံရသည့် ကမာရွတ်မြို့နယ်မှ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမျိုးရန်နောင်သိန်းနှင့် ကိုမင်းမင်းစိုးလည်း နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်စေရန် လှုံ့ဆော်မှုဖြင့် ယနေ့တွင်ပင် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်စီနှင့် ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၃ ရက်နေ့တွင် အဖမ်းခံရသူ ကဗျာဆရာ မင်းဟန်လည်း နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်စေရန် လှုံ့ဆော်မှု၊ အခြား ပုဒ်မ ၄ ခုဖြင့် အင်းစိန်ထောင်၌ပင် ထောင်ဒဏ် ၁၁ နှစ် ချမှတ်ခံလိုက်ရသည်။
ကိုမင်းဟန်နှင့် နီးစပ်သူ ၈၈ ကျောင်းသားများအဖွဲ့ဝင်တဦးက "ကိုမင်းဟန်ကို ၈၈ ကျောင်းသားများအဖွဲ့နဲ့ ၂၀၀၇ ခုမှာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ဗကသ ကို အင်တိုက်အားတိုက် ကူညီခဲ့သူ၊ ကဗျာဆရာများ သမဂ္ဂမှာ ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူ၊ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်နေသူအဖြစ် ပြောနိုင်ပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
အလားတူ ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာအတွင်းက ရန်ကုန်မြို့ ယုဇနပလာဇာရှေ့ ဆန္ဒပြပွဲကို ဦးဆောင်သူဟု စွပ်စွဲခံထားရသူ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် (ဗကသ) အဖွဲ့ဝင် မဟန်နီဦး (ဥပဒေနောက်ဆုံးနှစ်) ကို တာမွေမြို့နယ် တရားရုံးက ယနေ့၌ပင် ထောင်ဒဏ် ၉ နှစ်ခွဲ ချမှတ်သည်။
ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးထွန်းဦးက ''ကျနော်hသမီး သိပ်နစ်နာသွားတယ်။ အရင် သူ့နောင်တော်တွေတောင် ၆၅ နှစ် ချနေတာကို ကျနော်hသမီးအတွက် ဂရုမစိုက်တော့ဘူး။ ရှေ့ဆက်တက်ရင်လည်း ထူးလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအတွက် အခွင့်အရေး မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အယူခံဖို့ မလုပ်တော့ပါဘူးလေ'' ဟု ပြောသည်။
မဟန်နီဦးသည် သူ့အမှုအတွက် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးသူ တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေ ဦးအောင်သိန်းကို တရားရုံးအား မထီမဲ့မြင်ပြုမှု - ပုဒ်မ ၃ ဖြင့် အာဏာပိုင်များက စွဲချက်တင်ကာ ယခုလ ၇ ရက်နေ့က ထောင်ဒဏ် ၄ လ မျက်ကွယ်စီရင်ချက် ချပြီးနောက် ၅ ရက်အကြာတွင် ယခုလို ထောင်ဒဏ်ချခံရခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) – AAPP ၏ စားရင်းများအရ ယခုလ ၅ ရက်နေ့မှ ၁၁ ရက်နေ့အထိ အန်အယ်ဒီအဖွဲ့ဝင်များ၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများနှင့် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူများအား ပြစ်ဒဏ်ချနေရာ စုစုပေါင်း ၅၃ ဦး ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုလို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဥာဏ်ဝင်းက ''အန်ကယ့်အနေနဲ့ သုံးသပ်တာက နိုင်ငံရေးအရ ဖိနှိပ်တယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ လက်ရှိ အခြေအနေနဲ့ သွားချင်တယ်။ ပြည်သူတွေ မကြိုက်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ကိုင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ သွားမယ်။ ဒီဟာတွေအတွက် ပြည်သူလူထု အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူတွေကို ပိုမိုပြီးတော့ ဖိအားပေးတယ်၊ ပြစ်ဒဏ် ပေးနေတယ်လို့ပဲ ယူဆပါတယ်" ဟု သုံးသပ် ပြောဆိုလိုက်သည်။
နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကို နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေ ဆက်လက်ချမှတ်
ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကို မြန်မာစစ်အစိုးရက
ထောင်ဒဏ်ပြစ်ဒဏ်တွေ ချမှတ်နေလို့ ပြည်တွင်းပြည်ပက ဝေဖန်သံတွေ ထွက်ပေါ်
နေချိန်မှာပဲ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူတွေကို ထောင်ဒဏ်ပြစ်ဒဏ် ဆက်လက်ချမှတ်
နေပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံးဆိုရင်လည်း နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ၂၀ လောက်ကို
ရန်ကုန်မြို့မှာ သူတို့ကိုစစ်ဆေးနေတဲ့ တရားခွင်တွေကနေ ဒီကနေ့ ဆက်လက်ပြီး
ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်ကနေ ၁၁ နှစ် ကျော်အထိ ပြစ်ဒဏ်တွေ ချမှတ်ခဲ့တာပါ။
အကြောင်းစုံကို စုံစမ်းမေးမြန်းပြီး ကိုအောင်လွင်ဦးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကို ရုံးတင်စစ်ဆေးနေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ အင်းစိန်
ထောင်တွင်း အထူးတရားခွင်တွေနဲ့ တခြားမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ တရားရုံးတွေက ဒီမို
ကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူ အနည်းဆုံး လူပေါင်း ၂၀ လောက်ကို ထောင်ဒဏ်ပြစ်ဒဏ်တွေ
ဆက်လက်ချမှတ်ခဲ့တာပါ။ အခုနောက်ဆုံး ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသူတွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့
နှစ်ထဲတုန်းက ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ သံဃာတော်တွေရဲ့ မေတ္တာပို့
ကြွချီပွဲတွေ နောက်ဆက်တွဲ ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေ ဖြစ်ကြပြီးတော့ ဒီအထဲမှာ
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေ၊ အတိုက်အခံ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
(အန်န်အယ်လ်ဒီ) အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ကျောင်းသားလူငယ်တချို့လည်း
သာသနာညှိုးနွမ်းစေမှု၊ နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးကို ထိခိုက်စေမှု၊ ဥပဒေမဲ့ လူစု
လူဝေးတွေမှာ ပါဝင်မှု စတာတွေ အပါအ၀င် စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ ထောင်ဒဏ်ပြစ်ဒဏ်တွေ
ချမှတ်လိုက်တာလည်း ဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ တရားခွင်တွေ
ကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့က လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ ဦးမောင်မောင်လေးက
"ဒီနေ့ လှိုင်သာယာရုံးကနေ အင်းစိန် ထောင်တွင်းတရားရုံး၊ ဘူးရုံးကို ရွှေ့လိုက်တဲ့
၁၁ ယောက်၊ ရန်နိုင်ထွန်း၊ မီးသွေးခေါ် အောင်မင်းနိုင်၊ သန့်စင်မျိုး၊ ဦးတင်ယု၊
ကျော်စိုးဝင်း၊ ဆန်းဝင်း၊ ကိုမျိုးကျော်ခင်၊ ကိုဝင်းမြင့်၊ ကိုဆန်းနိုင်၊ စိုးမင်းမင်းခေါ်
စိုးငယ်၊ မလှလှမော်၊ အဲဒီ ၁၁ ယောက်ကို ထောင် ၇ နှစ်ခွဲ၊ အင်းစိန်အထူး ဘူးရုံးထဲက
ချလိုက်တယ်။ ပုဒ်မတွေက ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၁၅၇၊ ၅၀၅(ခ)။ နောက်တခါ ကိုမျိုးခိုင်ကို
၆ နှစ်ခွဲ ချလိုက်ပါတယ်။ ဒါလည်း အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး၊ တာမွေကပါပဲ။ ပုဒ်မက
၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၁၄၇၊ ၅၀၅(ခ)။ အဲဒီပုဒ်မတွေနဲ့ ချလိုက်တယ်။
"နောက်တခါ အလုံမြို့နယ် တရားရုံးကနေ မမြတ်မြတ်သိမ့်ကို ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်
ချလိုက်တယ်။ အင်းစိန်ဘူးရုံးထဲမှာ ဒီနေ့ချလိုက်တဲ့ ကိုမင်းဟန်ကို ထောင်ဒဏ် ၁၁ နှစ်
ချလိုက်ပါတယ်။ ပုဒ်မက ၁၄၃၊ ၁၅၄၊ ၁၄၇၊ ၁၅၂၊ ၂၉၅၊ ၅၀၅(ခ)။ အဲဒီပုဒ်မတွေနဲ့
ချလိုက်တယ်။ လောလောဆယ်မှာ အမြင့်ဆုံးပါပဲ။ နောက်တခါ ကိုမျိုးရန်နောင်သိန်း၊
၂ နှစ်၊ ၅၀၅(ခ)။ ကိုမင်းမင်းစိုး ၅၀၅(ခ) နဲ့ ၂ နှစ်။ ဒါ အခုလက်ရှိ ချထားတဲ့ဟာ။ စာရင်း
အရ လက်ရှိ ၁၉ ယောက် သိထားတယ်။"
အခုလို ထောင်ဒဏ်တွေ ချမှတ်ခံခဲ့ရသူတွေထဲမှာ အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေ၊ ကျန်းမာ
ရေးမကောင်းသူတွေလည်း ပါဝင်နေတာပါ။ အခုနောက်ဆုံး ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်နဲ့ ၆ လ
ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ အန်န်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သူ ဦးတင်ယုဟာဆိုရင်လည်း ကျန်းမာ
ရေးယိုယွင်းနေသူတဦး ဖြစ်တယ်လို့ ဒီကနေ့ စီရင်ချက်ချမှတ်တာကို သွားရောက်စုံစမ်း
ခဲ့တဲ့ သမီးဖြစ်သူ မသင်းသင်းယုက ပြောပါတယ်။
"ဒီနေ့ အမိန့်ချမယ်ဆိုတာသိလို့ ကျမသွားတော့ ကျမကို မောင်းထုတ်တယ်။ အဲဒီ
ထိပ်ကလူက။ ၀င်လို့မရဘူးဆိုပြီး မောင်းထုတ်တယ်။ အဲဒါနဲ့ ဒီအပေါက်ဝကပဲ ကျမ
အဖေကို စောင့်နေလိုက်တယ်။ ဂိတ်ပေါက်ကလူကိုတော့ ကျမအဖေ လှိုင်သာယာ
၁၁ ယောက်အဖွဲ့ ဒီနေ့အမိန့်ချမယ်ဆိုတာသိလို့ ကျမတို့လာတာ၊ ဘယ်နှစ်နှစ်လဲဆိုတာ
ကျမတို့သိချင်တယ်၊ အစ်ကိုကြီးတို့ စုံစမ်းပေးပါဆိုပြီး မေးလိုက်တော့ စုံစမ်းပေးတယ်။
အမိန့်ကို ၇ နှစ်ခွဲဆိုပြီးချလိုက်တယ်။
"ကျမအဖေက ရောဂါနဲ့ဆိုတော့ ကျမကတော့ စိုးရိမ်တယ်။ အဖေ့မှာ အစာအိမ်ရောဂါ၊
သွေးတိုးရောဂါရှိတယ်။ ဟိုတပတ် စနေနေ့က ထောင်ဝင်စာသွားတွေ့တဲ့အချိန်မှာ
အဖေ့မျက်နှာဆို အမ်းနေတာပဲ။ ကျမက အဖေ သွေးတွေတိုးနေတယ်၊ အဖေ မတင်ပြ
ဘူးလားမေးတော့ တင်ပြတယ်၊ အဖေ့ကို ဘာမှလာမလုပ်ပေးသေးဘူးလို့ ပြောတယ်။"
အခုနောက်ဆုံး စီရင်ချက် ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ နေရာမှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် စက်တင်ဘာ သံဃာ
တော်တွေရဲ့ မေတ္တာပို့ကြွချီ လှုပ်ရှားမှုတွေ နောက်ဆက်တွဲ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့
ကျောင်းသားလူငယ်တွေလည်း အပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ထောင်ဒဏ် ၉ နှစ်နဲ့
၆ လအထိ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် အပြစ်ပေးခံခဲ့ရတဲ့ ဒဂုံတက္ကသိုလ်က ဥပဒေနောက်ဆုံး
နှစ်ကျောင်းသူ မဟန်နီဦးရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးထွန်းဦးကတော့ ဒီလို နိုင်ငံရေး တက်ကြွ
လှုပ်ရှားသူတွေကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နေတာတွေဟာ တရားမျှတမှု ကင်းမဲ့နေတယ်လို့
"တရားစီရင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ဒီဟာတွေက အပြစ်
ဒဏ်တောင် ပေးဖို့မလိုတဲ့ကိစ္စတွေလို့ ကျနော်ကတော့မြင်တယ်။ အဖွဲ့အစည်း
လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖွဲ့စည်းခွင့်တော့ ရှိရမှာပဲလေဗျာ၊ ကျနော်တို့သိထားတာ။ ဒါ အဲဒီ
အဖွဲ့အစည်းက ဘာမှမလုပ်ဘူး၊ တိုင်းပြည်ကို ဘာမှမထိခိုက်ဘူးဆိုရင် အပြစ်ဒဏ်ချ
"ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျနော့်ရဲ့အတွေးလေးတခုကတော့၊ ဒါကတော့ သမီးရယ်မဟုတ်
ဘူး၊ အားလုံးပါပဲ၊ နိုင်ငံကျော် စာရေးဆရာကြီး ဗန်းမော်တင်အောင် ပြောခဲ့တဲ့ စကား
လေးကိုပဲ ကျနော်ပြောချင်ပါတယ်။ လူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဟာ သူ ဖြတ်သန်း
ကျော်လွှားနေတဲ့ ခေတ်ကြီးက သူ့ပခုံးပေါ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ သမိုင်းတာဝန်ကို သူ
ဘယ်လောက်သယ်ပိုး ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ တိုင်းရမှာပဲတဲ့။ ကျနော့်သမီး
ကလည်း ဒီလိုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော် ယူဆပါတယ်ဗျာ။
"ဒီစီရင်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဗျာ ကျနော် ခံစားချက်အရပြောရရင် သူ့ရှေ့က
နောင်တော်တွေ၊ အစ်မတော်တွေဖြစ်တဲ့ လူတွေတောင်မှ ၆၅ နှစ်တို့ ဘာတို့ နှစ်ကို
ရာနဲ့ချီချဖို့ အစီအစဉ်တွေ ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ ကျနော့်သမီးချခံရတဲ့ ပြစ်ဒဏ်က ဘာမှ
ထောင်ဒဏ် ၉ နှစ်နဲ့ ၆ လ အပြစ်ပေးခံခဲ့ရတဲ့ ဒဂုံတက္ကသိုလ်က ဥပဒေနောက်ဆုံးနှစ်
ကျောင်းသူ မဟန်နီဦးရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးထွန်းဦး ပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ တရားရုံးတွေကနေ နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကို
ထောင်ဒဏ်တွေ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ချမှတ်နေတဲ့နေရာမှာ မကြာသေးခင်က တရား
ခွင်ကို မထေမဲ့မြင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ထောင်ဒဏ် ၆ လ အပြစ်ပေးခံခဲ့ရပြီး
ဧရာဝတီတိုင်း မအူပင်အကျဉ်းထောင်ကို ပြောင်းရွှေ့ချုပ်နှောင်ထားတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ၉ ဦးရဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ မိသားစုဝင်
တွေလည်း တွေ့ဆုံခွင့်မရဘဲ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် တစုံတရာတော့ မသိရသေးပါဘူး။
ဂျာမဏီနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများ စီးပွားရေး ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်း
အာရှနဲ့ ဥရောပတလွှားက ငွေကြေးဈေးကွက်ဆိုင်ရာ သတင်းဆိုးတွေ ပိုကြားနေရ
တာကြောင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အလွန်အမင်း ကျဆင်းနေပြီဆိုတာ အထောက်အထား
ငါးနှစ်အတွင်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ဂျာမဏီနိုင်ငံဟာ စီးပွားရေးဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းမှု
ရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ ဂျာမဏီအစိုးရရဲ့ တရားဝင်အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြနေပါတယ်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်ရဲ့ တတိယသုံးလပတ်မှာ ဂျာမဏီစီးပွားရေးဟာ ၀.၅% ကျုံ့လာတယ်လို့
အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သုံးလပတ် နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက် စီးပွားရေး
ဆက်တိုက်ကျုံ့လာတာပါ။ ဒီအတွက် ပြည်ပထုတ်ကုန်တွေလည်း ထိခိုက်လာတယ်လို့
အပြစ်တင်ထားပါတယ်။ ဂျာမဏီနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့စီးပွားအင်အားအကြီးဆုံး တတိယ
မြောက်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ဥရောပမှာတော့ စီးပွားအင်အားအကြီးဆုံးလို့ ဆိုရမှာပါ။
အာရှဈေးကွက် ဒီကနေ့ပိတ်ချိန်မှာတော့ အာရှအဓိကစတော့ခ်အညွှန်းကိန်းတွေ အတော်လေး
ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ မနေ့ကတော့ အမေရိကန်Wall Street မှာ စတော့ခ်ဈေးတွေ ကျဆင်းပြီး
ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၇၀၀ ဖိုး ငွေကြေးကျားကန်ပေးမှုအစီအစဉ်ကို အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်
ဒီအချိန်မှာပဲ ကမ္ဘာ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေဟာ စီးပွားရေးကျဆင်းဆုတ်ယုတ်မှုတွေ ကြုံရပြီး အခုလိုကျဆင်း
မှုဟာ ရေရှည်ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ ပဲရစ်အခြေစိုက်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့
ကြီးက ပြောပါတယ်။ ကမ္ဘာ့စက်မှုထိပ်တန်းနိုင်ငံ၂၀ က ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဒီစီးပွားရေးပြဿနာ ငွေကြေးအကျပ်အတည်းတွေကို
ဖြေရှင်းဖို့ အခု စနေနေ့မှာ ၀ါရှင်တန်မှာ ဆုံကြဖို့ရှိပါတယ်။
အမေရိကန်မှာတော့ ၇နှစ်အတွင်းမှာ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း အများဆုံးဖြစ်လာပြီလို့ အမေ
ရိကန် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များ ဘန်ကီမွန်း စိုးရိမ်
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်က ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူတွေကို ပြင်းထန်တဲ့ ထောင်ဒဏ်တွေ ချမှတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအပေါ် အထူး စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်ရတယ်လို့ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အားလုံးကို လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး ရှေ့ခရီးမှာ မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံးကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပါဝင်ခွင့် ပေးပြီး အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးကို ဖော်ဆောင်ဖို့လည်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည်ချမှတ်မှု အမေရိကန် ရှုတ်ချ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေကို ထောင်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တဲ့အပေါ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ကန့်ကွက် ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ ဒါဟာဖြင့် ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူ အယောက် ၃၀ နီးပါးကို နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့က ထောင် ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့မှုအပေါ် နိုင်ငံတကာဘက်ကထွက်လာတဲ့ နောက်ဆုံး ဝေဖန်ကန့်ကွက်သံပါပဲ။ ကိုကျော်ကျော်သိန်းက အပြည့်အစုံ တင်ပြထားပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့က နိုင်ငံခြားရေးဌာနမှာကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အဖွင့်မှာကိုပဲ မြန်မာနိုင်ငံက နောက်ဆုံး ဖြစ်ရပ်အပေါ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ သဘောထားကို နိုင်ငံခြားရေးဌာန ဒုတိယ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Robert Wood က ထုတ်ဖော် ကြေညာခဲ့တာပါ။
“နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူ အနည်းဆုံး အယောက် ၃၀ ကို ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ်ကနေ ၆၄ နှစ်အထိ ချမှတ်ခဲ့တဲ့အပေါ် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက မြန်မာစစ်အစိုးရကို အပြင်းအထန် ကန့်ကွက် ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ ဒီ ရဲရင့်တဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူ တွေဟာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ တခုတည်းသောအပြစ်က စစ်အစိုးရရဲ့ တရားမ၀င်တဲ့ အုပ်စိုးမှုကို စိန်ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါ တယ်။”
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတဲ့ထဲမှာ ထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည်ချမှတ်တဲ့အချက်ကိုသာမက ဒီလူတွေရဲ့အမှုကို စစ်ဆေးစီရင်တဲ့ပုံစံကိုလည်း ပြစ်တင် ရှုတ်ချထားပါတယ်။
“အမှုတွေကို စစ်ဆေးစီရင်တဲ့ပုံစံကိုလည်း ကျနော်တို့ နောက်ထပ် ကန့်ကွက်ရှုတ်ချပါတယ်။ စစ်အစိုးရက အမှုတွေကို စစ်ဆေး တဲ့အခါမှာ မိသားစုဝင်တွေ၊ ဒါမှမဟုတ် ရှေ့နေတွေကို တက်ရောက်ခွင့်မပြုဘဲ စစ်ဆေးစီရင်ခဲ့ပါတယ်။”
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် ဒီ ပြစ်တင်ဝေဖန်ချက်မှာ ဒီကနေ့အချိန်ထိပြောရမယ်ဆိုရင် အပြင်းထန်ဆုံး စကားလုံးတွေပါဝင်နေပါတယ်။
တဆက်ထဲမှာပဲ နိုင်ငံတကာကအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းကျင့်သုံးတဲ့ အရပ်သားတွေ အပေါ် အနှောက်အယှက်ပေးတာ၊ ဖမ်းဆီးတာတွေကိုရပ်ဆိုင်းဖို့လည်း တောင်းဆိုထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ လူမျိုးစုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ဖို့၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မကြာသေး ခင်ရက်ပိုင်းက အကျဉ်း ချခဲ့သူတွေအပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂,၀၀၀ ကျော်ကိုလွှတ်ပေးဖို့လည်း အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ထပ်ပြီး တောင်းဆို ထားပါတယ်။
နယူးယောက်မြို့အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ကလည်း ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေကို ခုလို ထောင်ဒဏ် ချမှတ်တာဟာ သဘောထားကွဲလွဲသူတွေအပေါ် ပိုပြီး ပစ်မှတ်ထားနှိမ်နင်းလာတာကိုပြနေပြီး လူထုကို ခြိမ်းခြောက်ဖို့ သိသိသာသာရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ ဝေဖန်ထားပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ အများကဝေဖန်ခံနေရတဲ့ အခြေခံဥပဒေအသစ်အရ သူတို့လုပ်မယ်လို့ကြေညာထားတဲ့ အတု အယောင် ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးတွေမတိုင်ခင် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေကို ရှင်းလင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ တိုက်ရိုက် ဆက်ပြီး ပြောဆို သွားမယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေးဌာန ဒုတိယပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Robert Wood ကပြောကြောင်း ဗွီအိုအေသတင်းထောက် David Gollust ပေးပို့တဲ့ သတင်းဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် သူတို့ရဲ့ သြဇာအရှိန်အ၀ါကိုအသုံးပြုဖို့ ဒေသ တွင်းမဟာမိတ်တွေကို ဖိအားပေးသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သံအမတ်ကြီး အဆင့်မထားဘဲ သံရုံး ယာယီတာဝန်ခံအဆင့်နဲ့သာ သံအဆက်အသွယ် ပြုလုပ်နေတာပါ။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကို လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေတဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ နိုင်ငံသားတွေအားလုံးကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပါဝင်ခွင့်ပေးဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က မြန်မာစစ်အစိုးရကို ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောဆိုခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာကိုလည်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ် မှာပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအမျိုးသမီး မရီး အိုကဘဲ (Marie Okabe) က ပြောသွားပါသေးတယ်။
ကုလသမဂ္ဂဘက်ကတော့ မြန်မာ့အရေး လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေတာတွေကို ဆက်ပြီး လုပ်ဆောင်သွားပါမယ်တဲ့။
“မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာဟာ မြန်မာအစိုးရနဲ့ မြန်မာလူထုလက်ထဲမှာပဲ ရှိတယ်ဆိုတာ ကျမတို့ အမြဲတမ်း ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ငြိမ်းချမ်းပြီး သာတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်ရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံလူထုအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခွင့် ရစေမယ့် ယုံကြည် လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့၊ အားလုံးပါဝင်တဲ့၊ ပွင့်လင်းထင်သာမြင်သာမှုရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖော်ဆောင်ဖို့ ကုလ သမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကရော၊ သူ့ရဲ့ မြန်မာ့အရေး အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ အီဗရာဟင် ဂမ်ဘာရီကပါ တသမတ်ထဲ တောင်းဆိုလာတာပါ။ ဒီရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်တဲ့ထိ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ဆက်ပြီး လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။”
အမေရိကန်သမ္မတဘုရ်ှက သူရဲ့ အာရှရေးရာ ထိပ်တန်း အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဟောင်းတဦးဖြစ်သူ Michael Green ကို မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အထူးသံတမန်နဲ့ မူဝါဒရေးရာ အကြီးအကဲအဖြစ်ခန့်အပ်ရေး အမည်စာရင်း တင်သွားထားကြောင်း တနင်္လာနေ့ကပဲ သမ္မတအိမ်ဖြူတော်က ပြောထားပါသေးတယ်။
ဉာဏ်မောင်။ နိုဝင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၈
ကြည့်မြင့်တိုင်နှင့် လှိုင်သာယာမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်များကို အင်းစိန် ထောင်တွင်းတရားရုံးမှ ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်လိုက်သည်။
ဦးတင်ယုအပါအဝင် (၁၁) ဦးအဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် (၁၀) နာရီတွင် ထောင်ဒဏ် (၇) နှစ်ခွဲ အင်းစိန်ထောင်တွင်းတရားရုံးက ချမှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“ဦးတင်ယုတို့ကို အမိန့်ချတာကို သွားတွေ့ဖို့ ထောင်အာဏာပိုင်တွေက ဝင်ခွင့်မပြုဘူး၊ အင်းစိန် ထောင်ထဲက တရားရုံးက အမိန့်ချလိုက်တာ၊ ပုဒ်မ (၄) ခုနဲ့ စွဲထားတာ၊ အဲဒီအထဲမှာ သန့်ဇင်မျိုး ကတော့ (၅) မှုနဲ့ စွဲထားတယ်”ဟု ဦးတင်ယု၏ဇနီးက ပြောသည်။
ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူများမှာ ဦးတင်ယု၊ မောင်စန်းနိုင်၊ ကိုစိုးမင်း၊ မလှလှမော်၊ ကိုရန်နိုင် ထွန်း၊ ကိုသန့်ဇင်မျိုး၊ ကိုကျော်စိုးဝင်း၊ မောင်စန်းဝင်း၊ ကိုအောင်မင်းနိုင် (ခ) ကိုမီးသွေး၊ ကိုဝင်းမြင့်၊ ကိုမျိုးကျော်ဇင် တို့ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် လှည်းတန်းတရားရုံးတွင် အမှုရင်ဆိုင်နေရသူ ကိုသန်းဇော်မြင့်၊ ကိုသိုက်မင်း၊ မငယ်၊ ကိုသန့်ဇင်မျိုးနှင့် အခြားနှစ်ဦးတို့အား တရားရုံးအာဏာပိုင်များက အင်းစိန်ထောင်တွင်းတရား ရုံးသို့ ယနေ့ လွှဲပြောင်းလိုက်ပြီး မနက်ဖြန်တွင် အမိန့်ချမှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြော သည်။
“သန့်ဇင်မျိုးကို လှည်းတန်းမှာ စွဲထားတဲ့အမှုရယ်၊ သူတို့ကို လှည်းတန်းအချုပ်ကနေ ဒီနေ့ အင်းစိန်ထောင်ထဲကို ပြောင်းလိုက်တယ်၊ သူတို့က (၆) ယောက်အဖွဲ့၊ မနက်ဖြန်အမိန့်ချမယ်”ဟု ဆက်ပြောသည်။
ဦးတင်ယုအပါအဝင် အဖွဲ့ချုပ်ဝင်အချို့အား သြဂုတ်လအတွင်း အာဏာပိုင်များက နေအိမ်များမှ ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်ပြီး ပုဒ်မ(၅၀၅-ခ)နိုင်ငံတော်အကြည်အညိုပျက်စေမှု၊ ပုဒ်မ(၁၄၃) ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်သည့် လူစုလူဝေးတွင်ပါဝင်မှု၊ ပုဒ်မ (၁၄၅) လူစုခွဲရန် အမိန့်ပေးထား သည်ကိုသိလျှက်နှင့် ဆက်လက်ပါဝင်နေမှု၊ ပုဒ်မ(၁၅၂) ဝန်ထမ်းကို ပြန်လည်ခုခံမှုတို့ဖြင့် တရားစွဲခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
ဖြိုးကြီး။ နိုဝင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၈
မြန်မာရေတပ် အနေနှင့် ဘင်္ဂလာရေတပ်ကို ယှဉ်နိုင်ရန် အခြေအနေမရှိကြောင်း စစ်ရေး လေ့လာသူများက ပြောဆို
11/13/2008 မြန်မာ နအဖ ရေတပ်အနေဖြင့် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ရေတပ်ကိုယှဉ်နိုင်ရန် အခြေအနေမရှိသဖြင့် အငြင်းပွား ပင်လယ်ရေပြင်ပိုင်နက်မှ ဆုတ်ခွာသွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း နယ်စပ်ဒေသမှ စစ်ရေး အကဲခတ် တဦးက ပြောသည်။
သူက “ကုန်းတပ်မှာဆိုရင်တော့ မြန်မာဘက်က အသာရကောင်း ရနိုင်ပေမယ့် ရေတပ် ချင်းတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာဘက်က ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ဘင်္ဂလာရေတပ်ကို မယှဉ် နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် မြန်မာရေတပ်က အငြင်ပွားနယ်မြေကို သူပိုင်တဲ့ နယ်မြေဖြစ်ပါ တယ်ဆိုတာ တရားဝင်ကျေညာပြီးမှ နောက်ဆုတ်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ”ဟု ပြောသည်။
မြန်မာ နအဖ စစ်တပ်အနေဖြင့် ရေတပ်ချင်းယှဉ်နိုင်ရန် အခြေအနေမရှိသဖြင့် အငြင်းပွား ရေပိုင်နက်မှ ရေတပ်သင်္ဘောများ ဆုတ်ခွာသွားပြီး ကုန်းတပ်များကို နယ်စပ်တလျောက်တွင် အားဖြည့်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အဆိုပါ စစ်ရေးအကဲခတ်က ယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။
“မြန်မာရေတပ် သင်္ဘောတွေနဲ့ ဘင်္ဂလာရေတပ် သဘောင်္တွေကို နိုင်းယှဉ်ရင် ရန်ကုန် ကလာတဲ့ မြန်မာရေတပ်သင်္ဘောက ဘင်္ဂလာကအသေးဆုံး သင်္ဘောတွေလောက်ဘဲ ရှိတာပါ။ ခုလည်း ဘင်္ဂလာက နေဗီတွေကို မြန်မာရေတပ်က မြင်တော့တခါတည်းနဲ့ လစ်ပြေးသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာဘက်ကနယ်စပ် တလျောက်မှာ တပ်တွေတိုးချတာ ဖြစ်ပါ တယ်။ လိုအပ်ရင် ကုန်းပိုင်းက၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်နိုင်အောင် စီစဉ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ”
ဘင်္ဂလာရေတပ်မှာ ဖရီးဂိတ် သင်္ဘောများအပါအ၀င် အမေရိကန်လုပ် ခေတ်မှီ ရေတပ် သင်္ဘော အများအပြားရှိပြီး နည်းပညာပိုင်းတွင်လည်း မြန်မာရေတပ်ထက် သာကြောင်း သိရှိရသည်။
အကယ်၍ မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလာ စစ်ဖြစ်ပွားက ရေတပ်နှင့်လေတပ်တွင် မြန်မာက ဘင်္ဂလာကို ယှဉ်နိုင်ရန် အခြေအနေမရှိကြောင်းနှင့် ကုန်းတပ်တွင်သာ မြန်မာက ဘင်္ဂလာထက် သာကြောင်း အဆိုပါ စစ်ရေး အကဲခတ်က ပြောသည်။
မြန်မာ စစ်အာဏာပိုင်များ အနေဖြင့်လည်း ကုန်းတပ်ကို ပိုမိုအားကိုးပြီး ဘင်္ဂလာနှင့် ရေပိုင် နက် အငြင်းပွားသည့် အချိန်ကစတင်ပြီး စစ်သားအများအပြားကို ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် မြောက်ပိုင်းနှင့် ပလက်ဝမြို့နယ်သို့ စေလွှတ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ အစီအစဉ်မှာ မြန်မာနယ်စပ် စစ်တကောင်းတောင်တန်းနယ်မှတဆင့် စစ်တကောင်း ကိုထိ ထိုးဖေါက်တိုက်ခိုက်ရန် ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်သည်ဟု စစ်ရေးအကဲခတ်သူက ပြောသည်။
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်တွင် လေဖိအား နည်းရပ်ဝန်းတခုဖြစ်ပေါ်နေ
စစ်အစိုးရ မိုးလေ၀သနှင့်ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်တွင် လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းတခု ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း သိရသည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မနက်ပိုင်းက တိုင်းထွာချက်အရ ဘင်္ဂလာပင်လယ်အော် အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အဆိုပါ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းမှာ တဖြည်းဖြည်း အားကောင်းလာနေ ကြောင်း ဖေါ်ပြသည်။
အဆိုပါ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းမှာ အနောက်မြောက် ယွန်းယွန်းသို့ ညင်သာစွာ ရွေ့လျား နေကြောင်း ဖေါ်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိုးလေ၀သနှင့် ဇာလဗေဒဌာန၏ ကြိုတင်သတိပေးမှု မရှိခြင်းကြောင့် နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ကို ဆိုးရွားစွာခံခဲ့ရပြီး ယခုအခါ စစ်အစိုးရမှ မုန်တိုင်း သတိပေးမှုအပေါ် အထူးတလည် အာရုံစူးစိုက်မှု ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
မွန်ပြည်နယ်တွင် ရာဘာခြံ ဧက ၁၀၀ ကျော် ထပ်မံ သိမ်းဆည်းခံရ
Written by မိကျလွန်းထော
Thursday, 13 November 2008 11:16
မွန်ပြည်နယ် မုဒုံမြို့နယ် အဘစ်ကျေးရွာရှိ အမှတ် (၃၁၈) လက်နက်ကြီးတပ်ရင်းသည် တပ်နယ်မြေတိုးချဲ့ရန်အတွက် ရာဘာခြံ ၁၂၀ ဧကခန့်အား ဒေသခံပြည်သူများထံမှ ထပ်မံ သိမ်းဆည်းလိုက်သည်။
လွန်ခဲ့သော နိုဝင်ဘာလ (၇) ရက်တွင် ၄င်းတပ်ရင်းက တပ်နယ်မြေ ပြင်ပရှိ ခြံပိုင်ရှင် (၇) ဦးအား ခေါ်ယူပြီး အဘစ်ကျေးရွာတွင် ၄င်းကိစ္စအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ၄င်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ယခင်က ငွေ (၁၀၀၀၀) ကျပ် ပေး၍ပြုလုပ်ထားသော ခြံဝင်ခွင့်ကဒ်ကိုလည်း သိမ်းဆည်း လိုက်ပြီး ၄င်းခြံရှင်များအား နောက်ထပ် ခြံသို့သွားစရာမလိုတော့ဟုလည်း ပြောကြားသွား သည်ဟု ဒေသခံတစ်ယောက်က ပြောပြသည်။ ၄င်းအသိမ်းဆည်းခံရသော ခြံရှင် (၇) ဦးမှာ နိုင်အရွှေ၊ နိုင်အမွန်၊ နိုင်ဟလယ်၊ နိုင်သန့်၊ နိုင်ဗလိုင်၊ နိုင်ဇော်လတ်နှင့် နိုင်ပန်းရှိန် တို့ဖြစ်သည်။
''သူတို့တပ်မြေတိုးချဲ့ဖို့အတွက် သိမ်းလိုက်တာတဲ့၊ နောက်ထပ်လည်း ခြံသို့လုံးဝ သွားစရာမလိုဘူးလို့လည်း ပြောသွားတယ်၊ ကဒ်ကိုလည်းသိမ်းသွားတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ တစ်နေရာရာကို တိုင်ချင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်မှာတိုင်ကြားရမှာလည်းမသိဘူးဖြစ်နေ တယ်'' ဟု အသိမ်းခံရသည့်ခြံနှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
၄င်း၏ပြောပြချက်အရ ယခုထပ်မံသိမ်းဆည်းခံရသော ရာဘာခြံမြေ ဧက (၁၂၀)တွင် အစေးခြစ်နိုင်သောရာဘာပင် (၃၀၀၀) ကျော်ရှိပြီး လွန်ခဲ့သော ၂-၃ နှစ်မှစ၍ အစေးခြစ်နေကြောင်း၊ အသိမ်းဆည်းခံရသော ခြံပိုင်ရှင်များမှာ မုဒုံမြို့နယ်ရှိ အဘစ်ကျေးရွာ၊ ဆက်သွယ်ကျေးရွာ၊ ဒိုးမားကျေးရွာနှင့် ရောင်းဒေါင်းကျေးရွာများမှဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
၄င်းတပ်ရင်းမှ ခြံဝင်ခွင့်ကို ပိတ်ထားသော်လည်း မိမိတို့၏ စီးပွားရေးအကြပ်အတည်းကြောင့် အသိမ်းခံရသည့်ခြံထဲသို့ ခိုးဝင်ပြီး ရာဘာစေးများ ခြစ်နေရသည်ဟု အသိမ်းခံရသည့်ခြံရှင်နှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
ယခု အမှတ် (၃၁၈) တပ်ရင်း၏ တပ်မြေတိုးချဲ့ရန်အတွက်ယခုကဲ့သို့ သိမ်းဆည်းခြင်းသည် တတိယအကြိမ် သိမ်းဆည်းခြင်းဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သော ဇူလိုင်လနှင့် အောက်တိုဘာလတွင် သိမ်းဆည်းထားသော ခြံမြေများနှင့် တဆက်တည်းဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော ဇူလိုင်လတွင် ရာဘာခြံ ဧက (၂၀၀) နှင့် အောက်တိုဘာလတွင် ဧက (၂၅၀) ကိုလည်း သိမ်းဆည်း ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
၄င်းအပြင် လွန်ခဲ့သော သြဂုတ်လတွင်လည်း အမှတ် (၃၁၅) လက်နက်ကြီးတပ်ရင်းမှ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် ဝယ်ဝင်ကရားကျေးရွာနှင့်ပငကျေးရွာတဝိုက်ရှိ ရာဘာခြံ (၂၀၀) ဧကကိုလည်း သိမ်းဆည်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
တရားမဝင် လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းမှုကြောင့် ဆိုင် (၄၀) ခန့်အရေးယူခံရ
Thu 13 Nov 2008, အာကာ၊ မင်းအာသံ
တရားမဝင် လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းမှုကြောင့် မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ဝန်းကျင်ရှိ ဆိုင်ပေါင်း (၄၀) ခန့် အရေးယူခံရသည်ဟု ၄င်းတက္ကသိုလ်ဝန်းကျင်က ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သည့် သီတင်းပတ်တွင် နေပြည်တော်မှ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ မြန်မာ့လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးလုပ်ငန်း (EPC)မှ လာရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး လျှပ်စစ်မီးတရားမဝင် ဖြန့်ဝေရာ တက္ကသိုလ်လေ့ကျင့်ရေးတပ်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် လျှပ်စစ်မီးတရားမဝင် သွယ် တန်းခြင်းကို လက်ခံထားသောဆိုင်များ ယခုကဲ့သို့ အရေးယူခံရခြင်းဖြစ်သည်ဟု တက္ကသိုလ် ဝန်းကျင်ရှိ ဆိုင်ရှင်တစ်ဦးကဆိုသည်။
EPC မှ လာရောက်စစ်ဆေးပြီးနောက်ပိုင်းတွင် အရေးယူခံရသည့် ဆိုင်အားလုံး ယနေ့တိုင် လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်းမှ ဖြတ်တောက်ခံထားရသည်ဟု လျှပ်စစ်မီးဖြတ်တောက်ခံရသော ဆိုင်ရှင်တစ်ဦးကဆိုသည်။
''လာစစ်ပြီးတဲ့နေ့ကစပြီး ဒီနေ့ထိ ကျနော်တို့ မီးဖြတ်ခံထားရတယ်၊ (၂၃) သိန်း ဒဏ်ရိုက်ခံရ မယ်လို့ မနေ့က ကျနော်တို့ကိုလာပြီး အကြောင်းကြားထားတယ်၊ လာမယ့် တနင်္လာနေ့မှာ ရုံး သွားပြီး ဖြေရှင်းရမယ်'' ဟု ၄င်းအရေးယူခံရသော ဆိုင်ရှင်က ပြောသည်။
၄င်း၏အဆိုရ အရေးယူခံရသည့် ဆိုင် (၄၀)ခန့်တွင် စားသောက်ဆိုင်၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်နှင့် စတိုးဆိုင်များပါဝင်ပြီး ဒဏ်ငွေ (၂၃) သိန်းအား အချိုးကျတစ်ဆိုင်လျှင် (၅) သောင်းကျော် ပေး ဆောင်ရမည်ဟု ဆိုသည်။
တက္ကသိုလ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်း၏ ပြောပြချက်အရ အရေးယူခံရသည့်ဆိုင်များတွင် တက္ကသိုလ်လေ့ကျင့်ရေးတပ်မှ တရားမဝင်မီးဖြန့်ဝေပေးရာတွင် တာဝန်ရှိသော ဗိုလ်မှူးတစ်ဦး ၏ဆိုင်လည်း ပါဝင်ပြီး ၄င်းမှာ ဒဏ်ငွေကျပ် (၅၅) သိန်း ပေးဆောင်ရသည်ဟု ဆိုသည်။
တရားမဝင်မီးဖြန့်ဝေမှုများခြင်းကြောင့် တက္ကသိုလ်ဝန်းကျင်ရှိ အိမ်နှင့်ဆိုင်များမှာ လျှပ်စစ်ဓါတ် အား လျှော့နည်းလွန်းပြီး အသုံးပြုရန် အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း၊ အချို့ဆိုင်များတွင် ကိုယ်ပိုင်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်စက် ဝယ်ယူအသုံးနေရကြောင်း တက္ကသိုလ်ဝန်းကျင်ရှိ အိမ်ရှင်တစ် ဦးက ဆိုသည်။
''ကျနော်တို့မှာ အစိုးရမီး ဘယ်လိုမှသုံးလို့မရဘူး၊ အမြဲတမ်းပျက်နေတယ်၊ လာပြန်တော့ လည်း ဗို့အား(၁၀၀) လောက်ပဲရှိတယ်၊ မီးအားမြှင့်စက်သုံးလို့လည်း အဆင်မပြေဘူး'' ဟု အထက်ပါအိမ်ရှင်က ပြောပြသည်။
ပြည်ထောင်စု ဖြိုခွဲသူ တို့ရန်သူ
နိုဝင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၈
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း မြန်မာအင်တာနက်သုံးစွဲသူများရဲ့ ဖိုရမ်တခုမှာ အဏ္ဏ၀ါစစ်သည် တစ်ဦး အမည်နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေပိုင်နက် ပြဿနာအပေါ် သူ့အမြင်ဖေါ်ပြထားသည်ကို ဖတ်လိုက်ရသည်။
အဆိုပါ ရေတပ်မှ အငြိမ်းစား ရေးသားတင်ပြသူက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ရေပိုင်နက်အငြင်းပွားမှု တွင် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ တရားနည်းလမ်းကျကြောင်း သမိုင်းအထောက်အထား များဖြင့် တင်ပြထားသည်ကို ဖတ်ရှုရ၏။
မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှစ်နိုင်ငံအကြား ၁၉၆၆ခုနှစ်တွင် မြေပြင်နယ်နမိတ်ကိုသာ သဘောတူသတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ကြပြီး ရေပိုင်နက်နယ်နမိတ်ကို ယနေ့အထိ သဘောတူ မသတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ဟု ဖေါ်ပြထားသည်။ မြေပြင်အနေအထားအရ နတ်မြစ်ကို နှစ်နိုင်ငံနယ်နမိတ်အဖြစ် သဘောတူခဲ့သော်လည်း ရေပြင်ဆိုင်ရာနယ်နမိတ်ကို ၁၉၇၄၊ ၁၉၈၆ တို့တွင် နှစ်နိုင်ငံအစည်းအဝေးများ ဖြင့် သဘောတူညီချက်ရရန် ကြိုးစားသော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ဟု ဖေါ်ပြထားသည်။
အဆိုပါ ရေတပ် အငြိမ်းစား စာရေးသူ က မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှစ်နိုင်ငံ နယ်နမိတ်ကိစ္စရပ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသား အချို့ကပင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်မှ သံယောင်လိုက်ပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရကို ပုတ်ခတ်ရေးသား ကြသည်ကို တွေ့ရသဖြင့် ရင်နာမိကြောင်း ပါရှိသည်။ ထို့ပြင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် အမေရိကန်အစိုးရတို့ ရေတပ် ပူးတွဲ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ကာ အမေရိကန်က မြန်မာကို ဖိအားပေးသယောင် လည်း ရေးသားထားသည်။
သည်နေရာတွင် အဓိကပြောလိုသည့် အချက်မှာ စစ်အစိုးရမှန်သလား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရမှန်သလား ဆိုသည်ထက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်အစိုးရက လူထုကို မတရားဖိနှိပ် ချုပ်ချယ်လွန်းသဖြင့် လူထုက စစ်အစိုးရကို မုန်းတီးကာ ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေခြင်း၊ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်အစိုးရ ဆိုသည့် အမြင်ဖြင့် လည်း မရှုမြင် နိုင်တော့သည်ကို မြင်တွေ့ရသည်။
တနည်းအားဖြင့်ပြောရလျင် ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲသည်ဟု ပင်ဆိုဆို အစိုးရနှင့် လူထုအကြား ယခုလို ကိစ္စတွင်ပင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စရာဖို့ အလားအလာ မတွေ့နိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ စစ်အစိုးရက မိမိပြည်သူကို နှိပ်စက်လွန်း သဖြင့် ယခုလို အမြင်မျိုးပေါ်ထွက်လာသည်ဟုပင် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ကောက်ချက်ချလိုပါသည်။
စစ်အစိုးရက တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရေးဟု အရေးသုံးပါးကို တွင်တွင်အော်သော်လည်း တိုင်းရင်းသားများကိုလည်း နှိပ်စက်၊ ကျန်သည့် ပြည်သူတွေကိုလည်း နှိပ်စက် တာများ လွန်းသဖြင့် ယခုလို အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတို့နှင့် တစုံတရာ ပြဿနာပေါ်ခဲ့လျင် အမျိုးသားရေးဆိုသည့် ခေါင်းစဉ် အောက်တွင် စစ်အစိုးရက ပြည်သူကို စည်းရုံးနိုင်မှာလား ဆိုသည်မှာ သံသယ များစွာရှိပါသည်။
၂၀၀၂ခုနှစ် မေလ၊ဇွန်လများတွင် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် နယ်စပ်ချင်းထိစပ်သည့် နေရာများတွင် ပစ်ခတ်မှုများဖြစ်ကာ စစ်အစိုးရက ပြည်သူတွေကို အိမ်တိုင်းအလံလွှင့်ထူခိုင်းကာ ထိုင်းဆန့်ကျင်ရေး လှုံဆော်ခဲ့ဘူးသည်။ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဂျာနယ်များတွင် ထိုင်း ဟုမသုံးနှုန်းရ ယိုးဒယားဟု သုံးရမည်ဟု ညွှန်ကြားခဲ့ဘူးသည်။ ထိုစဉ်က ပြည်သူလူထု၏ အမြင်မှာ နအဖအစိုးရက နောက်ကွယ်မှ နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက် တခုခုဖြင့် နယ်စပ်အရေးကို တမင်လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု သာမြင်ကြသည်။ ဒေါက်တာ မတင်ဝင်းမှလွဲပြီး မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ် တဦးတယောက်ကမှ အစိုးရဘက်မှ လိုက်မရေးသားကြ။
ဤသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစိုးရနှင့် ပြည်သူများအကြား ကြီးမားသည့် စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုရှိနေသည် ကိုသက်သေပြ ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုအဖြစ်အပျက်တွင်လည်း ထိုသဘောတရားပင် ဖြစ်သည်။
ယခုရက်ပိုင်းတွင်ပင် လက်နက်မဲ့ အကြမ်းမဖက်ပဲ ၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ နိုင်ငံရေးပြဿနာ အဖြေရှာဖို့ ပြောဆိုခဲ့ကြသည့် ၈၈ မျိုးဆက်မှ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များကို ထောင်ဒဏ် ၆၅နှစ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ အလုပ်သမား အခွင့်အရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး ကိစ္စရပ်များတွင် သတ္တိရှိစာ ပြောဆိုဆောင်ရွက်သည့် မစုစုနွေးကို ထောင်ဒဏ် ၁၂နှစ်ခွဲချခဲ့သည်။ ထင်ရှားသည့် မြန်မာဘလော့ရေးသူ ကိုနေဘုန်းလတ်ကို အီလက်ထရွန်းနစ်ပုဒ်မ ဟုဆိုကာ အနှစ် ၂၀ချခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့ ပြည်သူ ကိုကြီးမားသည့် အကြောက်တရား ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်အပြစ်ပေးနေသည့် လုပ်ရပ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းတွင်စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှု ရလဒ်ကို သာဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်သည်။ မည်သည့် အမျိုးသားရေး ကိစ္စ အစိုးရနှင့် ပြည်သူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကိစ္စရပ်များကို ပေါ်ထွန်းစေမည်မဟုတ်ဟု ယူဆမိပါသည်။
စစ်အစိုးရက မိမိနိုင်ငံ ရေပိုင်နက်ဟု ဆိုသည့် နေရာများတွင် ရေနံ၊ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ တူးဖေါ်ရောင်းချသည့် ငွေများဖြင့် လူထုအတွက် အကျိုးရှိမည်ဟု ယုံကြည်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရှားပါးပေလိမ့်မည်။ လူအများစု က အဆိုပါ ရေနံ၊ ဓါတ်ငွေ့ ရောင်းချရသည့် ငွေများသည် စစ်လက်နက်သို့မဟုတ် စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်များ၏ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားသာ ဖြစ်မည်ဟု ယုံကြည်နေကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကို ပြိုကွဲအောင်၊ စိတ်ဝမ်းကွဲပြားအောင်လုပ်ဆောင်နေသူများသည် ပြည်ပနိုင်ငံကြီးတွေလည်း မဟုတ်၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများလည်း မဟုတ် ကိုယ့်ပြည်သူကို ကိုယ်နှိပ်စက် အုပ်ချုပ်နေသည့် စစ်အာဏာရှင် အစိုးရသာ ဖြစ်တော့သည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/13/2008 1 အကြံပြုခြင်း
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအဖွဲ့များကို စစ်အစိုးရ မဟာမိတ်ဖွဲ့တော့မလား
မြန်မာစစ်အစိုးရက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့် နေ့ရက်အတိအကျ ထုတ်ဖော်ခြင်းမရှိသေးသည့် အဆိုပါရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါတီထောင်၍ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြရန် နအဖ က အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအဖွဲ့များအား လိုက်လံသိမ်းသွင်းနေသည်၊ နအဖ ကျောထောက်နောက်ခံပေးထားသည့်ပါတီများက အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအဖွဲ့ပါတီများနှင့် မဟာမိတ်လုပ်လိမ့်မည်ဆိုသည့်
သတင်းများ လတ်တလော ထွက်ပေါ်နေသည်။
အထူးသဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှ အပစ်ရပ်အဖွဲ့များအား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်၊ စစ်ဖက်ရေးရာလုံခြုံရေး (စရဖ) အကြီးအကဲ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်တို့က ခြောက်တလှဲ့ ချော့တလှဲ့ဖြင့် တွန်းအားပေးနေကြောင်း ရေးသား ပြောဆိုနေကြခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းသို့ နအဖ၏ တွန်းအားပေးနေမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စများကို အထူးပြုရေးသားဖော်ပြနေသော ‘သျှမ်းသံတော်ဆင့်သတင်းစဉ်’ မှ အယ်ဒီတာတဦးဖြစ်သူ စိုင်းစိန်ကြည်ကို ခေတ်ပြိုင်က မေးမြန်းခဲ့သည်။
မေး။ ။ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်တို့က ရှမ်းနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်တွေက အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေကို ပါတီထောင်ပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခိုင်းဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ကြားပါတယ်။ ဦးစိုင်းလင်းဦးဆောင်တဲ့ အထူးဒေသ (၄) မိုင်းလားအဖွဲ့က ဒု-ဗခကရဲမြင့်နဲ့ သဘောတူသွားပြီလို့လည်း ကြားပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာများသိထားတာ ရှိပါသလဲခင်ဗျ။
ဖြေ။ ။ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်က အောက်တိုဘာ (၁၇) မှာ ကေအိုင်အိုနဲ့တွေ့တယ်။ (၁၈-၁၉) မှာ မိုင်းလားအဖွဲ့နဲ့ ကျိုင်းတုံမှာ တွေ့တယ်။ (၂၁-၂၂) မှာ လားရှိုးမှာ အန်ဒီအေကေ၊ မြောက်ပိုင်းအပစ်ရပ်ရှမ်းအဖွဲ့၊ မထူးနော်တို့နဲ့ တွေ့တယ်။ ဒါပေမယ့် လားရှိုးနဲ့ မြစ်ကြီးနားကတော့ ပါတီထောင်ဖို့ ဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ ကျနော်တို့ လုံးဝမကြားဘူး။ ထူးခြားတာက ကျိုင်းတုံမှာပြော တယ်။ မိုင်းလားအဖွဲ့က သူတို့ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေ (၃-၄) ယောက် (ဦးစိုင်းလင်းပါတယ်လို့တော့မကြားဘူး) လာတွေ့ပြီး တော့၊ ကျနော်တို့ အဲဒါလုပ်ဖြစ်အောင် အထူး (၄) ဌာနချုပ် မိုင်းလားမှာ ဆွေးနွေးမယ်လို့ပဲ ပြောတယ်လို့ကြားတယ်။ ကျနော်တို့ လုပ်မယ်၊ ကတိပြုပါတယ် အဲဒီလိုပုံစံတော့ မဟုတ်သေးဘူးလို့ မိုင်းလားနဲ့ နီးစပ်တဲ့အသိုင်းအ၀န်းက ပြောတယ်။
ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်သည် ယခင်လက ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (ကေအိုင်အို) တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဟူသော သတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကချင်နိုင်ငံခြားရေးတာဝန်ခံတဦးဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူးကြီး ဂျိမ်းစ်လွန်းဒေါင်းကို ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ ကေအိုင်အိုက ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်၊ စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်နေသည်ဆ်ိုသည့် သတင်းများ မှန်မမှန် မေးမြန်းရာ ဗိုလ်မှူးကြီး ဂျိမ်းစ်လွန်းဒေါင်းက ယခုကဲ့သို့ စတင်ဖြေကြားသည်။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ ကေအိုင်အိုအနေနဲ့ ဘယ်နည်းမဆို ပါတီတခုဖွဲ့ဖို့ အစီအစဉ်မရှိဘူး။ ကျနော်တို့ ကေအိုင်အိုနာမည်ကို သုံးပြီးတော့ ပါတီဖွဲ့စည်းမှာ မဟုတ်ဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်သင့်တယ်ဆိုရင် ပြည်သူလူထုကနေ ပါတီဖွဲ့ရမှာပေါ့။ ကျနော်တို့ဟာ လက်နက်ကိုင်တဲ့အဖွဲ့ဆိုတော့ ဒါ ပါတီဖွဲ့လို့ လုံးဝမသင့်တော့တဲ့ဟာဖြစ်တယ်။
မေး။ ။ ကေအိုင်အိုထဲက အဖွဲ့ဝင်တွေကနေ သီးသန့်ပါတီထောင်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုသဘောထားမလဲ ခင်ဗျာ။
ဖြေ။ ။ လူတဦးတယောက်ကနေ လုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင် ကေအိုင်အိုကနေ အပြတ်ထွက်သွားပြီးတော့ သူကြိုက်တဲ့ ပြည်သူ လူထုတယောက်အနေနဲ့ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးကိုယူပေါ့။ အခုအချိန်အထိ ကျနော်တို့မှာ ဘယ်သူက ဘာသွားလုပ်မယ် ဆိုတာတော့ မရှိသေးဘူး။
မေး။ ။ နအဖ ကနေ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် လက်နက်ဖြုတ်မယ်ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်လုပ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေလည်း ထွက်နေပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကေအိုင်အိုက တခုခုကြိုတင်စီစဉ်ထားတာများ ရှိပါသလားခင်ဗျာ။
ဖြေ။ ။ ဒီဟာပြောဖို့က စောပါသေးတယ် ထင်တယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ (၅) နှစ်လောက်ကတည်းက ပြောနေတာပဲ။ ပြည်သူလူထုရဲ့ လုံခြုံရေး အားလုံး အာမခံချက်ရှိပြီဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းတဲ့တိုင်းပြည်မှာ တပ်မတော်တခုထက်ပိုပြီး ဘယ်မှာမှ မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် တိုင်းပြည်တခုမှာ တော်လှန်ရေးတခုထက်ပိုပြီးရှိတယ်ဆိုတာ အဲဒီတိုင်းပြည်ဟာ မငြိမ်းချမ်းဘူး။ ပြည်သူလူထု မခံနိုင်တဲ့ဟာတွေ များပြားလို့ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပေါ်တယ်။ ဒီဟာလုပ်ဖို့ဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ အာမခံချက်အပေါ်မှာ ပိုပြီးမူတည်လိမ့်မယ်။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအဖွဲ့အတော်များများ၌ စစ်အစိုးရနှင့်ဆက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်သည့် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနှင့် နအဖကို တိုက်ရေး လူငယ်များကြား အုပ်စုကွာခြားမှုများဖြစ်နေသည်ဟု ရလလဖ ခွဲထွက်ခေါင်းဆောင်တဦးက ပြောခဲ့ဖူးသည်။
၀ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် (UWSA) အဖွဲ့အတွင်းမှာလည်း စီးပွားရေးအားသန်သည့် ဝေရှောက်ခန်းအုပ်စုနှင့် စစ်ရေးအားသန်သည့် ပေါက်ယူချန်အုပ်စုကွဲနေကြာင်း ရှမ်းသံတော်ဆင့်သတင်းစဉ်၌ ဖော်ပြထားသည်။
သို့သော် နအဖက ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ တရုတ်နယ်စပ်ဌာနချုပ်ရုံးစိုက်သည့် အပစ်ရပ်အဖွဲ့များကို အနုနည်း၊ အကြမ်းနည်းများအသုံးပြု၍ ကိုင်တွယ်မှုများဖြစ်ပေါ်လာလေ အဆိုပါအဖွဲ့များ တဖွဲ့နှင့်တဖွဲ့ ပိုမိုနီးစပ်လာလေ ဖြစ်လာကြောင်း သျှမ်းသံတော်ဆင့်သတင်းစဉ် အယ်ဒီတာ စိုင်းစိန်ကြည်က ယူဆသည်။
မေး။ ။ သျှမ်းသံတော်ဆင့်သတင်းစဉ် အယ်ဒီတာ စိုင်းစိန်ကြည်ခင်ဗျား။ တကယ်လို့ နအဖက အကျပ်ကိုင် ဖိအားပေးတဲ့နည်း ဒါမှမဟုတ် အနုနည်းတွေသုံးပြီး သိမ်းသွင်းမယ်ဆိုရင် အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေထဲမှာ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုး ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ မြင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ကြားရတာက ပြီးခဲ့တဲ့ (၄-၅-၆) လကတည်းက တရုတ်နယ်စပ်မှာ ဌာနချုပ်အခြေစိုက်တဲ့ အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေ ရှမ်းပြည်နဲ့ ကချင်ပြည် (၃-၄-၅) ဖွဲ့က နအဖက သူတို့ကို အနုနည်းဖြစ်ဖြစ် အကြမ်းနည်းဖြစ်ဖြစ် သူတို့ ကြုံလာလေလေ အချင်း ချင်းနီးစပ်မှု ရှိလေလေ ဖြစ်လာတယ်။ အချင်းချင်းတိုင်ပင်မယ်၊ သဘောတူညီချက်ရပြီးမှ လုပ်မယ်ပေါ့။ အဲဒါတွေက ကေအိုင်အို၊ ဒီမိုကရေစီသစ်တပ်မတော်-ကချင် (အန်ဒီအေကေ)၊ ကိုးကန့်၊ ပန်ဆန်း ၀ အဖွဲ့၊ ဦးစိုင်းလင်း အထူးဒေသ (၄) (မိုင်းလား) တွေပေါ့။ အပြန်အလှန်အားကိုးတဲ့ ပုံစံက ပိုပြီး ကြီးမားလေပေါ့။ တခုရှိတာက နယ်မြေအကျယ်ဆုံး၊ အင်အားအတောင့်တင်းဆုံး ပန်ဆန်း အဖွဲ့ကို ဘာမှ အသိမပေးဘဲနဲ့ နအဖနဲ့ သီးခြားလုပ်မလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်လေ။ ကျနော်တို့ ခန့်မှန်းတာလည်း ဟုတ် တယ်၊ မျှော်လင့်တာလည်း ဟုတ်တယ်ပေါ့။ မိုင်းလား အထူး (၄) အဖွဲ့က မတင်မကျ မြွေမသေတုတ်မကျိုးပုံစံနဲ့ နအဖကို တန်ပြန် မျှော်လင့်ချက်ပေးတဲ့ပုံစံဖြစ်မလားပေါ့။
နအဖဗိုလ်ချုပ်များက တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးဟု ကြွေးကြော်နေသော်လည်း လက်တွေ့အရမူ အပစ်ရပ်အဖွဲ့တိုင်းရင်း သားများနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီထောင်ထားသူ တိုင်းရင်းသားများအကြား ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများ ပြုလုပ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရခဲ့သည့် ပြည်တွင်းတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များထဲမှ ရှမ်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အက်စ်အန်အယ်လ်ဒီ) တဖွဲ့သာချန်၍ ကျန်ပါတီများကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အက်စ်အန်အယ်လ်ဒီ ဥက္ကဋ္ဌ စ၀်ခွန်ထွန်းဦး အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအရ တက်ကြွသည့် ရှမ်းခေါင်းဆောင်များကိုလည်း ရှမ်းပြည်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီဖွဲ့စည်းသဖြင့် နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်ခဲ့သည်။
သို့သော် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့က ကချင်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုမူ တရားဝင်မဟုတ်သော်လည်း တစုံတရာ ပြောဆို ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ နအဖတို့ ကျင်းပခဲ့သည့် အမျိုးသားညီလာခံသည် လွတ်လပ်ပွင့်လင်းမှုမရှိသဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားပါတီများက သပိတ်မှောက်ခဲ့သည့်အကြားမှ နအဖက အပစ်ရပ်အဖွဲ့များကို အပြီးတိုင်တက်စေပြီး ဖွဲ့စည်း ပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းတခုကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် ရေးဆွဲခဲ့သည်။ ထို့နောက် အဓမ္မ အတည်ပြုခဲ့ပြီး အချောအဆင့်သို့ ရောက်ရှိသွား ပြီဖြစ်သည့် အဆိုပါ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေအရ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။
ပြည်တွင်းမှ ဖျက်သိမ်းခံပါတီတခုဖြစ်သော ဇိုမီးအမျိုးသားကွန်ဂရက် ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (စီအာပီပီ) အဖွဲ့ဝင်နှင့် ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ်အဖွဲ့ (ယူအန်အေ) အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ ဦးပူကျင့်ရှင်းထန်ကမူ နအဖ၏ ဖွဲ့စည်းပုံတရားမ၀င်သဖြင့် ၎င်းတို့အနေဖြင့် ပါတီပြန်ဖွဲ့၍ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် အစီအစဉ်မရှိဟု ပြောသည်။
မေး။ ။ ဦးပူကျင့်ရှင်းထန်ခင်ဗျား။ အန်ကယ်တို့အဖွဲ့ကို နအဖက ဖျက်သိမ်းထားတယ်။ ပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကတော့ မထွက်သေးဘူးပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် ပါတီအသစ်ဖွဲ့ပါ။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပါဆိုပြီး နအဖက ပြောလာရင်ရော ဘယ်လိုစဉ်းစားထားပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ သူတို့ အတည်ပြုထားတယ်ဆိုတဲ့ အခြေခံဥပဒေက ဘယ်လိုဆိုထားလည်းဆိုတော့ ဒီအခြေခံဥပဒေကို လက်ခံတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းကို လက်ခံမယ်။ ဒီအခြေခံဥပဒေကို မထောက်ခံတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကိုတော့ နိုင်ငံရေးပါတီအနေနဲ့ လက်ခံလို့ မရဘူး ဆိုတာပါတယ်လေ။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ တကယ်လို့ အခုဥစ္စာတွေ (ပါတီတွေ) တော့ ဖျက်သိမ်းထားပြီးသား။ နောက်ထပ် သူတို့က စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ထုတ်လာပြီး မှတ်ပုံတင်တင်ပါ လျှောက်ပါဆိုရင်လည်းပဲ အဲဒီစကားကြီးက ရှိနေတော့ အခြေခံဥပဒေကို လုပ်ထားတဲ့ ဥစ္စာက ကျနော်တို့က လက်မခံတဲ့အတွက် ဆက်လုပ်လည်း အပိုပဲ။ ရမှာလည်း မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ ကျနော်တို့က အဲဒီအထဲမှာတော့ ပါမယ်မထင်ပါဘူး။ အခြေခံဥပဒေဆိုတာ ပြည်သူလူထုရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကသာလျှင် ရေးဆွဲရမယ်။ အဲဒီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါတာ တယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲ ဒါတွေတောင်မှ သူတို့ ခေါင်းခေါက်တဲ့ လူတွေသာ ပါနေတာ။ (စစ်မှန်တဲ့) ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်မပါဘဲနဲ့ သူတို့က ညီလာခံလုပ်တယ်။ အဲဒါကို ညီလာခံလည်း မခေါ်ထိုက်ဘူး။ အဲဒီက ထွက်လာတဲ့ ဥပဒေ၊ အခြေခံဥပဒေလည်းပဲ တာဝန်ရှိသူတွေက ဆွဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ သူတို့ခေါင်းခေါက်တဲ့ သူတို့ လူတွေက ဆွဲတာ။ အဲဒါကို အတည်ပြုဖို့ဆိုပြီး ဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်တဲ့ အချိန်ခါမှာလည်းပဲ ဒီမှာ နာဂစ်မုန်တိုင်းနဲ့ တပြည်လုံးကို အလူးအလဲခံနေရတဲ့ အချိန်မှာ အဲဒါကို လာလုပ်နေတော့ အားလုံးက ကန့်ကွက်တယ်။ တခြားတိုင်းပြည်တွေကလည်း ကန့်ကွက်တယ်။ ကန့်ကွက်ရဲ့သားနဲ့ သူတို့ လုပ်တယ်ဆိုတော့ ဒါတွေဟာ အားလုံး လက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူး။ ဒီအခြေခံဥပဒေတွေကို အကြောင်းပြပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာက လုံးဝမမှန်ကန်တဲ့အလုပ်ပဲဆိုပြီးတော့ ကျနော်တို့ အစကတည်းက ကြေညာချက်နဲ့ ကန့်ကွက်ထားတာတွေရှိတယ်။ အဖွဲ့ချုပ်ကလည်းကန့်ကွက်တယ်။ အားလုံးလိုလိုက ကန့်ကွက်တယ်။
မေး။ ။ နအဖ က အပစ်ရပ်အုပ်စုတွေကို ရသလောက် သိမ်းသွင်းပြီးတော့ မဟာမိတ်ပါတီတွေအနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ပေးဝင်မယ်။ ပြီးရင် လွှတ်တော်ထဲမှာ တိုင်းရင်းသားတွေလည်း ပါတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ နအဖထောက်ခံတဲ့ပါတီ အများစုနဲ့ အစိုးရဖွဲ့နိုင်အောင် လုပ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေလည်း ထွက်နေတယ်။ အဲဒီပုံစံ ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ရော အဲဒီလုပ်ရပ်က တရားဝင်ပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားတွေကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ ဆိုနိုင်မလား။
ဖြေ။ ။ ဒါတွေက တိုင်းရင်းသားကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့လည်း မဆိုနိုင်ဘူး။ နောက်ပြီးတော့လည်း သူတို့ (နအဖ) က တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးဆိုတာ သူတို့ ခုလိုလုပ်ရင် တိုင်းရင်းသားကို ဖြိုခွဲတာပဲကျမှာပါပဲ။ ငြိမ်းအဖွဲ့ထဲမှာ မွန်ပြည်နယ်က လုံးဝလက်မခံဘူး။ ရှမ်းတချို့ကလည်း လက်မခံဘူး။ အဲဒီလိုဖြစ်နေတယ်။ ကရင်လည်းပဲ လက်မခံဘူး။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှလွဲ၍ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအဖွဲ့ အတော်များများ အမျိုးသားညီလာခံမှ ချမှတ်ခဲ့သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကို ထောက်ခံခဲ့ရသည်။ ထိုမူကြမ်းသည် ယခု မူချောဖြစ်လာပြီ။ ထိုစဉ်က ညီလာခံတက်ခဲ့သည့်
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအဖွဲ့များ အတိုက်အခံအဖွဲ့များ၏ အပြစ်တင်ခံခဲ့ရသည်။ ယခုလည်း စစ်အစိုးရအကြိုက် ရုပ်သေးအရပ်သားအစိုးရ ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် မဟာမိတ်ပါတီထောင်ရမည်ဆိုလျှင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအဖွဲ့များကို ပြည်သူက အမြင်စောင်းတော့မည်။
သို့သော် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအဖွဲ့များဘ၀မှာ လက်နက်ကိုင်ထားသဖြင့် အစိုးရက မိတ်ဖွဲ့နေခြင်းဖြစ်သည်။ လက်နက်မရှိလျှင် စစ်အစိုးရက အရာသွင်းတော့မည်မဟုတ်။ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရာမှာလည်း ချောမွေ့တော့မည်မဟုတ်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး စစ်အစိုးရအလိုကျ တစုံတရာ အတိုင်းအတာထိ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအဖွဲ့များ လိုက်လျောလေမလားဆိုသည်မှာ မကြာခင် အဖြေထွက်တော့မည်ဖြစ်သည်။
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (ကေအန်ယူ) ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နော်စီဖိုးရာစိန်နှင့်
၁၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၈
မေး။ ။ အမျိုးသမီး အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတဦး ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဟာ နိုင်ငံရေးအရ အတော့ကို နအဖ ဘက်က တင်းကျပ်နေတဲ့အချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ နိုင်ငံရေးကို နိုင်ငံရေးအရ ဖြေရှင်းမယ်လို့ ကေအန်ယူက ပြောတဲ့အတွက် ဆရာမအနေနဲ့ ကရင်တမျိုးသားလုံးကို ကိုယ်စားပြုပြီးတော့ ဘယ်လိုကြိုးစားဆောင်ရွက်ဖို့ ရှိပါသလဲခင်ဗျ။
ဖြေ။ ။ အမျိုးသမီး အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတဦးအနေနဲ့ ပြောလိုတာက ကရင်တမျိုးသားလုံးရဲ့ စစ်မှန် တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အတွက် နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးအရ ဖြေရှင့်မယ့်ကိစ္စကို ကျမနေနဲ့ ကျမတို့ ကေအန်ယူရဲ့ (၁၄) ကြိမ်မြောက် ကွန်ဂရက်မှာ ချမှတ်ထားတဲ့ မူဝါဒနဲ့ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ လုပ်ဆောင်ရမယ့် ကိစ္စအဝဝမှာ ကေအန်ယူရဲ့ ချမှတ်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပဲ အကောင်အထည်ဖော်ပြီး လုပ်ဆောင်သွားရမှာ ဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာပြေလည်ဖို့ရာ နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ ကျမတို့ ကေအန်ယူအနေနဲ့ အမြဲပဲ တံခါးဖွင့်ထားပါတယ်။ ဒါကိုအဖြေရဖို့ နအဖအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
မေး။ ။ ကရင်အမျိုးသမီးတဦး အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဖြစ်လာတဲ့အတွက် တချို့ကကြိုဆိုတဲ့လူရှိသ လို တချို့ကလည်း အားမလိုအားမရနဲ့ စိုးရိမ်သူတွေရှိပါတယ်။ ဆရာမအနေနဲ့ ဘာပြောချင်ပါသလဲခင်ဗျ။
ဖြေ။ ။ ဒါကတော့ အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ လူဆိုတာ အကောင်းအဆိုး တခုခုတော့ အဝေဖန်ခံရမှာ ဖြစ် တယ်။ အမျိုးသမီးတဦး နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်လာတဲ့အတွက် တချို့က အားမလိုအားမ ရနဲ့ စိုးရိမ်သူတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမပြောလိုတာက အမျိုးသားရော၊ အမျိုးသမီးပါ မြန်မာပြည်အရေးနဲ့ ကရင့်နိုင်ငံရေးမှာ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုခဲ့တဲ့သူတွေ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံရေးလောကမှာ လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့သူတွေဟာ ဘယ်တဦးတယောက်ကမှ နိုင်ငံရေးတက္ကသိုလ်က အောင်မြင်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးပါရဂူတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ အမျိုးသားရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ တိုင်းရင်းသားအရေး၊ မြန်မာပြည်အရေးအတွက် ဦးဆောင်မှုပြုခဲ့ကြတာဖြစ် ပါတယ်။ အဓိကလိုအပ်ချက်က တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီပေါ်ထွန်းဖို့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့မြန်မာပြည် ဖြစ်လာဖို့အတွက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ဆရာမအနေနဲ့ နအဖနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ အခြေအနေပေးလာရင် ဘယ်လိုစွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဆိုင်ရာ စကားပြောတဲ့အချိန်ကျရင် ကေအန်ယူက ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ပြင်ဆင်မှုအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ပြောဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ နအဖအနေနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို ဖန်တီးလာမယ်ဆိုရင် ကျမတို့ ကေအန်ယူတခုလုံးအနေနဲ့ သွားရောက်တွေ့ဆုံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ကေအန်ယူဟာ နအဖကို လက်နက်ကိုင်ပြီး တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ အမျိုးသမီးတဦး အထွေထွေအ တွင်းရေးမှူး ဖြစ်လာတဲ့အချက်ဟာ ကေအန်ယူရဲ့ စစ်ရေးအပေါ် ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိမလဲဆိုတဲ့ မေးမြန်းမှုတွေရှိနေပါတယ်။ ဆရာမ ဘာများရှင်းပြချင်ပါသလဲခင်ဗျာ။
ဖြေ။ ။ ကေအန်ယူအတွက် အုပ်ချုပ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးတွေမှာ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး တဦးတည်း လုပ်ဆောင်သွားရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကေအန်ယူဟာ စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အစည်းအရုံးတခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟာ အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာမှဆိုးရွားတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရှိစေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ (၁၄) ကြိမ်မြောက် ကွန်ဂရက်မှာ ချမှတ်သွားတဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်၊ စစ်ရေးလမ်းစဉ်အတိုင်း သွားမှာဖြစ်ပြီး တာဝန်အသီးသီး ပေးအပ်ထားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ လုပ်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ဆရာမအနေနဲ့ မဟာမိတ်ရေးရာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ၊ ကရင်အမျိုးသားရေးဆိုင်ရာ စတဲ့လုပ်ငန်း စဉ်တွေကို ကိုင်တွယ်ရာမှာ တစုံတရာ အခက်အခဲရှိမယ်လို့ ထင်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ ဘာမှ အခက်အခဲရှိမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျမထင်ပါတယ်။ ကျမပြောသွားတဲ့အတိုင်း ကေအန်ယူ ဟာ လူတဦးတယောက်တည်း လုပ်ရမယ့်အလုပ်မဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ ကေအန်ယူ ရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေဟာ စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှု (collective leadership) ဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီး လုပ်ဆောင်သွားရမှာ ဖြစ်တယ်။
မေး။ ။ နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ ကရင်အမျိုးသားထုနဲ့ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ ကရင်ခွဲထွက်အဖွဲ့တွေကို ဘာများ ပြောချင်ပါသလဲခင်ဗျ။
ဖြေ။ ။ ကျမအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့ ကရင်အမျိုးသားထုနဲ့ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ ကရင်အမျိုးသားတွေ နောက် ကရင်ခွဲထွက်အဖွဲ့တွေကို ပြောချင်တာက ကျမတို့ ကရင်အမျိုးသားတွေဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ ဖိ နှိပ်မှုအောက်မှာ ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်။ ကရင်အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကရင်လို့သိရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ကရင်လူမျိုးတွေ ဖိနှိပ်မှုကလွတ်မြောက်ဖို့၊ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်တာဝန်ယူရမယ့် လူတွေဟာ ကရင်လူမျိုးတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ကရင့်တော်လှန်ရေးနဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစ်ီရေး အောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက် ဘာတွေလိုအပ်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ကရင့်တော်လှန်ရေးနဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး အောင်မြင်ဖို့အတွက် တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဟာ ကရင် တမျိုးသားလုံးသာမကဘဲ မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့ တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား များနဲ့အတူ ဒီမိုကရေစီနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ တရားမျှတမှုရှိတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားတဲ့သူတွေ ညီညီညွတ်ညွတ် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကို ရည်မှန်းပြီး တူညီတဲ့အမြင် ဝါဒနဲ့ လက်တွဲသွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
စွာကျယ် (၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၈)
နေပြည်တော်မှာရှုပ်ကုန်ပြီ။ ဟာ ဘာတွေရှုပ်တာလဲ။ နေပြည်တော်မှာလူတွေရှုပ်ကုန်ပြီ။ ကြပ်ပြေးလို့ ခေါ်တဲ့ဒေသက ရွာတွေကိုဖယ်ပြီး လမ်းတွေဖောက်၊ တိုက်တွေဆောက်၊ ရန်ကုန်က လူတွေရောက်လာလို့ လူတွေရှုပ်ကုန်ပြီလို့ပြောတာ၊ ဘယ်လိုလူတွေလဲ။ အများသိတဲ့အတိုင်း ရန်ကုန်က ဝန်ထမ်းလူတွေပေါ့။ မလာချင့် လာချင်၊ မပြောင်းချင် ပြောင်းချင်နဲ့ ရောက်လာကြတာ၊ ပြောင်းလာကြတာ။
ညနေရုံးဆင်းချိန်မှာ ရုံးဖယ်ရီကားတွေက ကြပ်ပြေးမြို့မဈေးမှာ ဈေးဝယ်ဖို့ နာရီဝက် ကားရပ် စောင့်ပေးတယ်။ အဲဒီမှာ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကို အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ၊ ဌာနအစုံ တွေ့ရတယ်။ အစိမ်းနု၊ အစိမ်းရင့်၊ အဝါနုအဝါရင့်၊ အနီနု အနီရင့်၊ အပြာနု အပြာရင့်စတဲ့ စိမ်းဝါနီပြာရောင် စုံဖြာတဲ့ ယူနီဖောင်း အရောင်အဆင်းတွေနဲ့ မြို့မဈေးရဲ့ သားငါးနဲ့ ကုန်စိမ်းဈေးတန်း၊ စားစရာရောင်းတဲ့ မုန့်ဆိုင်တွေမှာ နာရီဝက်အတွင်း ကြိတ်ကြိတ်တိုးပြီး အချိန်မီ အလုအယက်ဝယ်ခြမ်းရတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ။
ဟေ့လူ… ဒီမြင်ကွင်းကို ဘယ်လိုမြင်သလဲမေးတော့ ရန်ကုန်က ဟို… မြောက်ဥက္ကလာ၊ တောင်ဥက္ကလာနဲ့လှည်းတန်း၊ ကမာရွတ်၊ စမ်းချောင်းနဲ့ကြည့်မြင်တိုင်အပြင် ပုဇွန်တောင်၊ သာကေတနဲ့ ဒဂုံတောင်/မြောက်ပါ မကျန် အဲ့ဒီမြို့နယ်အစုံမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို ရန်ကုန်ကနေ ကန်ထုတ်လိုက်လို့ ဒီကို စုပြုံပြီး ရောက်လာကြတာ။ ရောက်တဲ့နေရာမှာ လုပ်ကြ၊ ကိုင်ကြ၊ ဈေးဝယ်ကြနဲ့ သွားစရာ၊ စားစရာ၊ နားစရာက ဒီမြို့မဈေးပဲရှိတာ။ ဌာနပေါင်းစုံက အမျိုးသမီးတွေ၊ အမျိုးသားတွေ၊ အသိမိတ်ဆွေတွေ၊ မမြင်ဖူးတဲ့သူတွေ၊ မြင်ဖူးတဲ့သူတွေ၊ မသိသေးတဲ့လူတွေ၊ သိဖူးတဲ့လူတွေ၊ တွေ့ကြ၊ မြင်ကြ၊ ပြောကြ၊ ဆိုကြ၊ နှုတ်ဆက်ကြနဲ့ ရန်ကုန်က ဒုက္ခသည်အစုံ လာဆုံတဲ့ဒီနေရာ ကြပ်ပြေးမြို့မဈေး၊ ဒီနေရာမှာ လူတွေရှုပ်ကုန်ပြီ။
အဲ… ကြပ်ပြေးနေပြည်တော်ကို ရောက်လို့မှ မကြာသေးဘူး ထပ်ရှုပ်ကုန်ပြန်ပြီ။ ဘာတွေ ရှုပ်ဦးမှာလဲ၊ ဇာတ်လမ်းတွေ ရှုပ်ကုန်ပြီ။ ရှုပ်လား၊ မရှုပ်လား ဟော… ကြည့်ပါဦး။ နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက ရုံးအမိန့်ထုတ်ရပါပြီ။ ဘာလို့ ဒီအမိန့်ထုတ်ရတာလဲ လို့မေးတော့ ဟို… ဟို… တပ်ချုပ်ကြီးထံ ဝန်ထမ်းအပျိုတွေဆီက တိုင်စာရောက်လို့တဲ့။ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဝန်ထမ်းမိသားစုအဆောင်တွေမှာ လူပျို၊ အပျိုတွေ၊ ဝန်ထမ်းမိသားစုတွေ၊ လူလွတ်တွေရောပြီး အခန်းနေရာချထားပေးလို့ လူပျို၊ အပျိုတွေနဲ့ လူလွတ်တွေရဲ့ ဇာတ်လမ်းပေါ့။ လူလွတ်ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ။ ဟာဗျာ… လူလွတ်ဆိုတာ ဇနီးမယားကို ရန်ကုန်မှာထားခဲ့တဲ့ အမျိုးသား။ ဒီမှာ တယောက်တည်း လွတ်လပ်နေတဲ့လူ၊ လွတ်နေတဲ့လူ၊ လူလွတ်ပေါ့ဗျာ။ အဲ့ဒီလိုပဲ အမျိုးသမီးတွေကလည်း သူတို့ရဲ့ခင်ပွန်းယောက်ျားကို ရန်ကုန်မှာ ထားခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီး လူလွတ်၊ ဘယ်လိုရှုပ်ကုန်ကြတာတုန်း။
ဘယ်လိုရှုပ်ကုန်တာတုန်းလို့မေးရင်တော့ မဖြေတတ်ဘူးဗျာ။ လူပျိုအပျို၊ အမျိုးသားလူလွတ်၊ အမျိုးသမီးလူလွတ်၊ အဲ…လေးပွင့်ဆိုင်တော့ လွတ်ချင်သလို လွတ်နေကြမှာပေါ့ဗျာ။ အဲ… အချို့က ထမင်းလခပေးစားရင်း အသွားအလာများကြသတဲ့။ ဒီတော့ နေပြည်တော် မြို့တော်ဝန် ဗိုလ်မှူးကြီး သိန်းညွန့်ဆိုတဲ့ လူက ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးပြီး (၁၄.၇.၂ဝဝ၈) ရက်စွဲပါ စာအမှတ် ဝဝ၈/ဝ၈/နပတ (မတဝ) နဲ့ ထုတ်တဲ့ ရုံးအမိန့်စာ အဲဒီအမိန့်စာမှာ… အကြောင်းအရာက နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနယ်မြေရှိ အစိုးရအိမ်၊ အိမ်ခန်းတွင်နေထိုင်ခွင့်ရရှိသူများ လိုက်နာရန် စည်းကမ်းချက်များ ထပ်မံဖြည့်စွက်ခြင်းတဲ့။ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲရဲ့လမ်းညွှန်ချက် အရဆိုပြီး အချက် (၄) ချက်ကို ထပ်မံဖြည့်စွက် ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။
အရပ်စကားနဲ့ပြောရရင် နံပါတ် (၁) အိမ်ထောင်သည်လိုင်းမှာ အပျိုလူပျိုများအပြင် လူလွတ်တွေပါ မနေရတော့ဘူးတဲ့။ နံပါတ် (၂) အိမ်ထောင်သည်လိုင်းမှာနေတဲ့ အမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေက မိသားစုမခေါ်လို့ရှိရင် အိမ်ထောင်သည်လိုင်းထဲမနေရဘူး၊ လူပျိုလိုင်းလည်းမနေရဘူးတဲ့။ အပြင်မှာ မိမိအစီအစဉ်နဲ့ ငှားရမ်းနေရမယ်တဲ့။
ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေကျတော့ မိသားစုမခေါ်ရင် ဘယ်လိုနေရမယ်လို့တော့မပါဘူး။ နံပါတ် (၃) အချက်က ဝန်ထမ်းအိမ်ရာမှာ ရုံးခန်းဖွင့်တာတို့၊ မူကြိုဖွင့်တာတို့၊ ကျူရှင်ဖွင့်တာတို့ မလုပ်ရဘူးတဲ့။ အဲဒီ နံပါတ် (၃) အချက်က အပိုထည့်လိုက်တဲ့သဘောပါ။
အဓိက နံပါတ် (၁) နဲ့ နံပါတ် (၂) အချက်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒါက စောစောကပြောတဲ့ လူတွေ ရှုပ်ကုန်ပြီဆိုတဲ့ အချက်ကို ဟန့်လိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲ။ ကျနော်တို့ လူပျိုတွေကို အပျိုဆောင် မသွားပါဘူးလို့ ဒီနေ့ရုံးခန်းမှာ ခံဝန်လက်မှတ်ထိုးရတယ်။ ကဲနေကြတဲ့ လူလွတ်တွေကြတော့ မပါဘူးလေ။ အဲဒါကြောင့် သူတို့ကို ဒီလိုရုံးအမိန့်စာ ထုတ်ရတာဖြစ်မှာပေါ့လို့ ရုံးတွေမှာ ပြောသံကြားရပြန်တယ်။
ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ရင် အပျိုလူပျိုတွေ၊ လူလွတ်တွေဟာ အချင်းချင်း ဒါမှမဟုတ်၊ အိမ်ထောင်သည် လိုင်းသားလိုင်းသူတွေနဲ့ ရှုပ်နေလို့ ခွဲထုတ်တဲ့သဘောပေါ့ဗျာ။ အပျိုလူပျိုတွေကို မပြောလိုပေမယ့် စောစောက ပြောတဲ့လူလွတ်တွေ၊ တော်တော်ကဲတဲ့ အမျိုးသားဖိုးကဲတွေနေမှာပေါ့ဗျာ။ ဇနီးမယားကို ရန်ကုန်မှာထား၊ နေပြည်တော်ကြပ်ပြေးမှာ တယောက်တည်း လွတ်လပ်နေတဲ့လူ၊ လွတ်နေတဲ့လူ၊ လူလွတ်ဆိုတဲ့ လူတွေကို ကြိမ်းမောင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာ။
ဒီလူလွတ်လူကဲတွေက ကြပ်ပြေးနေပြည်တော်ရောက်စက ကျန်ခဲ့တဲ့ဇနီးမယားတွေဆီ၊ အလျှိုအလျှို ရုံးပိတ်ရက်မှာ လှစ်ကနဲလှစ်ကနဲပြန်ကြတာ။ ဟော… ကြာလာတော့ စရိတ်ကုန်၊ ဇလုံပွန်းလာပြီလေ။ အဲဒီတော့ စရိတ်အကုန်မခံနိုင်တော့လို့ နေပြည်တော်မှာပဲ ဇလုံပွန်းကြတာနေမှာ ပေါ့ဗျာ။ ဟုတ်တယ်… အဲဒါကြောင့် '“နေပြည်တော်မှာရှုပ်ကုန်ပြီ” လို့ ပြောတာကိုး။
အဲ… နောက်ဆုံးနံပါတ် (၄) အချက်ကတော့ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ကို မလိုက်နာရင် မင်းတို့တတွေ တိုက်ခန်းကဖယ်ကြတဲ့။ ကြပ်ပြေးနေပြည်တော် မြို့တော်ဝန်ရဲ့အမိန့်တော် ဒူ… ဝူ… ဝူ… ဝူ။
အလိုဗျာ .. ကျနော့် ဇာတိဘယ်အရပ်ကဆိုတာတောင် မေ့တေ့တေ့ပါ .. တချို့ တလည်း တရုတ်ပြည်နယ်စပ်က တချို့ ကလည်း ယိုးဒယားနယ်စပ်က လာတာလို့ အမျိုးမျိုးပြောကြတာပါပဲ .. ဒါပေမယ့်လည်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံးတော့လည်း ပလတ်စတင် ဗန်းလေးထဲထည့် ရောင်းခံရတာပါပဲ … လမ်းဘေးမှာပေါ့ ..
အဂ်လိပ်လို မတတ်ရင်တောင် ကလေးကား ခွေးကား လောက်တော့ ၀ယ်ထားကြတာပါပဲ ..
မြန်မာဗီစီဒီ သီချင်းတွေ ခွေကတော့ တပိုင်းပေါ့လေ .. ဒါပေမယ့်လည်း အသေကျပ်အနေကျပ် ခေတ်ကျပ်ကြီးမှာ အပမ်းဖြေစရာ ဆိုလို့ .. ဒီအရုပ်လေးတွေပဲကြည့်ရတာ … သီချင်းလေးပဲနားထောင်ရတာ ..တီဗွီက ကိုရီးယားကားဆိုတာကလည်း မီးလာတဲ့အချိန်နဲ့ မတိုက်ရင် ကြည့်ခွင့်ရတာ မဟုတ်ဘူးမှလား ..
ထားပါလေ.. အဆိုတော် ရင့်မကြီးတွေ ကားတ၀ီဝီနဲ့ ကျုပ် ထိုင်နေတဲ့ရှေ့ တင်ဖြတ်နေကြတာပဲ ဟာ ..
နေဦးဗျ… ကျုပ်က ဒီဗီဒီခွေချင်းအတူတူ နည်းနည်းတော့ ထူးတယ်.. သူများလို ဗန်းထဲတော့ ထည့်ရောင်းမခံရဘူး .. ဆိုင်ရှင်လွယ် အိတ်ထဲမှာ … တိတ်တိတ်ပုန်းရောင်းခံရတာ..
ဟာ……. တမျိုးတော့ မထင်ပါနဲ့ …. ကျုပ်က Rambo4အခွေပါ … လူတွေရဲ့ ထုံစံအတိုင်း မကြည့်ရဘူးဆို မှ ပိုကြည့်ချင်တာကလား … တနေ့ တနေ့ ဆိုင်ရှင်မှာ ရောင်းရတာ မနည်းဘူးရယ်.. အဲ.. ဒီဗီဒီခွေဗန်းထဲမှာတော့ .. '' RamBo4မရောင်းပါလို့ .. လူမြင်အောင် စာလေးထောင်ထားတာပေါ့ ..''
ဒါကလည်း .. သူ့ ဝမ်းစာရေးလေ.. ကာကီရောင်ဝတ်.. အစိမ်းရောင်ဝတ် .. အပြာရောင်ဝတ်.. ယူနီဖောင်းဝတ်တွေလာတိုင်းမျက်နှာပျက်ပျက်နဲ့ သူ့ ခမျာ လိုင်းကြေးခေါ်လား ..ဆက်ကြေးခေါ်လား .. မျက်နှာပျက်ပျက်နဲ့ ပေးရရှာတယ်..
ကျုပ်လို မြိုးမြိုးမြတ်မြတ် သတ္တ၀ါလေးတွေနဲ့ မှ သူ့ မှာလည်းအသက်ရှုချောင်ရှာတယ်…
လွယ်အိတ်ထဲမှာ ကျုပ်တယောက်ထဲတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ … စိန်စီသော ၀က်မ လို့ အများခေါ်တဲ့ စိန်စီသော ည အခွေလည်း
သူ့ လွယ်အိတ်ထဲမှာပဲ … စိန်ရောင်ပြောင်လက်လက်ညှီစို့ စို့ မို့ လို့ စီဒီခွေချင်းတောင်
သူ့ နားမကပ်ချင်ပါဘူး .. ဒါတောင် ဒီ ၀က်မ မျက်နှာကို စီဒီ ကာဗာ မှာ ကပ်မထားပေလို့..
ကျုပ်ကြားဘူးတာတော့ .. အရင်တုန်းက လူအများပေါက်ကွဲချင်ရင် ဘောလုံးပွဲကြည့်ပီး ဆဲကြသတဲ့ .. အခုခေတ် အဲဒီ ၀က်မ အခွေများကြည့်ပြီး လူများ ဆဲကြသလား မှတ်ရတယ်.. တော်တော်တော့ ရောင်းရသားဗျ
ထားပါလေ… တနေ့ တော့ ဘယ်ကဘယ်လိုရောက်တယ်မသိ … ကွန်ပြူတာရှေ့ ထိုင်ထိုင်နေတတ်တဲ့ ကောင်လေး တယောက် အိမ်ကျုပ်ရောက်သွားပါတယ်.. သူ့ ဆီမှာ အဲဟို .. ၀က်မအခွေလည်းရှိသပေါ့ .. မြန်မာမှန်ရင် မကြည့်ဘူးတဲ့ သူ မရှိဘူးတောင် ထင်ပါတယ်လေ..
ဟောဗျာ … တနေ့ အစိမ်းရောင်ဝတ်များ ကောင်လေးအိမ်လာပြီး မွေနှောက်ကြပါလေရောလား ..
အစကတော့… ကောင်လေးနှယ်.. ဆက်ကြေးများ လိုင်းကြေးများ မပေးပဲ ဒီဗွီဒီရောင်းနေလို့ လားလို့ ..
ဘယ်ဟုတ်မလဲ .. အီလက်ထရောနစ်အက်ဥပဒေဆိုလား .. အဲဒီကတည်းက ခမျာလေး ပျောက်သွားလိုက်တာ
ဟော .. နဲနဲကြာတော့ ထောင် အနှစ် ၂၀ကျော်သူ ကျသွားသတဲ့ ..
ကျုပ်လည်းပဲ စိတ်မချမ်းသာပါဘူး .. ကျုပ်ကြောင့်လေလား .. ၀က်မကြောင့်လေလား ကျုပ်လည်းမသိပါဘူး ..
ဒါနဲ့ ပဲ .. ကျုပ်ကိုရောင်းခဲ့တဲ့ ဆိုင်ရှင်နဲ့ အခြားအမျိုးတူ နာမယ်တူ အခွေတွေ ၀ယ်ထားကြတဲ့ ပိုင်ဆိုင်တွေလည်း၁၅နှစ် နှစ်၂၀ကျ ကြတော့မှာပဲရယ်လို့ စိတ်ပူမိသား ..
ဘာမှတော့မကြားရပါဘူး .. ကျုပ်ကောင်လေးတယောက်ပဲ ကံဆိုးရှာပါတယ်ထင်တယ် ..
ဟုတ်တယ်လေ.. အဲလောက် လမ်းဘေးမှာ ဗန်းကိုစီနဲ့ ဝမ်းစာရှာနေကြ .. တချို့ ကလည်းဆိုင်ကြီးကနားကြီးနဲ့ အကြီးအကျယ်
ရောင်းကြ ..ဖောက်သည်ဖြန့် ကြ ..
ဘယ့်နှယ်.. ကျုပ် အိမ်က ကောင်လေးမှ ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လို့ ..
တနေ့ တော့ ကျုပ်သူငယ်ချင်း တယောက်ကို ဖုန်းဆက်မေးမိတယ်.. အခြားဘော်ဒါများသတင်းလည်းကြားလို ကြားငြားပေါ့လေ ….
‘’ဟလို .. သူငယ်ချင်း .. ငါ့ကို ခေါ်ထားမိတဲ့ကောင်လေးတော့ ဒုက္ခ ရောက်ရှာပီ.. မင်းအိမ်မှာရော..
အဆင်ပြေရဲ့ လားကွာ ..’’
‘’ငှင်း.. ငှင်း … ပြေပါတယ်ကွာ..’’
‘’ မင်းအသံက အဆီရစ်နေတဲ့ အထက်စီးက အသံပါလားကွာ .. မင်းဘယ်များရောက်နေပါသလဲ… လုံခြုံရဲ့ လား..တော်ကြာ လမ်းကြိတ်စက်နဲ့ မိနေဦးမယ်.. ‘’
‘’ပြေပါတယ်ကွာ.. ငါရောက်နေတာ XXXX ၀န်ကြီးရဲ့ အိမ်မှာကွ .. ၀က်မလည်း ငါနဲ့ ရှိနေတယ်..’’
‘’ဟောဗျာ …. !! ‘’
ကျနော့မှာ လမ်းကြိတ်စက်အောက် မရောက်ပဲ စိတ်တွေ ပြားချပ်သွားပါလေရော ....
( ညအိပ်ရင်း တွေးမိတာနဲ့ .. ရေးမိတာပါ … စိတ်ကလည်းရှုပ်နေလို့ )
BY မလေးမေ ... 11/13/20080အကြံပြုခြင်း